အမှောင်လောက၏ သမီးငယ် (ဇာတ်လမ်းရှည်) – Grab Love Story
အလျှင်းမရှိတော့ပြီ….တကောင်ကြွက် တမျက်နှာဟူသည်….အမည်နာမ သာ ဆိုးသည်….သူမ အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးပင် ဖြစ်နိုင်သည်……မိမိဘဝ ခုမှ သုညဘဝ ဖြစ်နေသည်…..အရာရာက သူမအပေါ်မတရား…..ဘာမှမရှိလေ ကောင်းလေ……သို့သော်….သူမ မြတ်နိုးတာက အခုသူမ ကိုင်ထားသော လိုင်နာဗူးပြားပြားလေး နှင့် ထိုပစ္စည်းလေးပေးခဲ့သူ……သူမ အတွက် မိဘ
….မောင်…ညီမ….ဘာမှမလို….ဘာမှလဲမရှိတော့…..ဘာတွေဖြစ်မှန်းလဲမသိတော့…….သူမ ဘာလုပ်ခဲ့သနည်း….. မှန်ကိုကြည့်ပြီးသူမ ပြုံးလိုက်သည်……ပြုံးနေသော မျက်နှာအောက်တွင် ဝမ်းနည်းသောအမူအရာ…..နောက် နာကြည်းသော အမူအရာ…….
ဒုန်း…….ကျွီ……..ဟူသော အသံနှင့် အတူ….ရဲ ဝတ်စုံဝတ် …ရဲမေ ၂ ယောက်…ရောက်လာသည်…. “အပြစ်သူ….မယုယု……တရားရုံးသွားမယ်….လာခဲ့…..”
ဆွဲမိဆွဲရာ….ဆွဲလိုက်တော့…မှန်ကွဲစလေး……သူမက အလျှော့မပေး…မှန်ကွဲစလေး ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်..
နပ်(စ်)ကော်ဖီ ပလိန်းကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်မွှေရင်း…….ကျွန်ုပ်…ခွက်ကိုကောက်ကိုင်လိုက်သည်…အတော်ပင် ပူလောင်သောရေနွေးကြောင့်ထင်သည်….ကြွေခွက်လေးမှာ မီးခဲအမျှ ပူနေသည်…..ဖဲရိုက်သည်ဟု သတင်းရပြီး ဖမ်းထားသော…လူသုံးယောက်ကို…ကျွန်ုပ် ပါဝါရှိသည်နှင့်အညီ….ဆိုင်ကယ်စီးသကဲ့သို့ ဒူးများကွေးခိုင်းထားသည်။ ထိုနောက် ၎င်းဆိုင်ကယ်စီးခိုင်းထားသော….လူ ၃ ယောက်၏ရှေ့တွင် ကျွန်ုပ်..ခုံဆွဲထိုင်ကာ…၎င်းတို့ထဲမှ ၁ ယောက်ကို ကော်ဖီခွက်ပူပူ ကို ကိုင်ခိုင်းလိုက်သည်…..
“အွန်….နင့်ကို သောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး….ငါသောက်ရမှာ ပူသေးလို့ ကိုင်ခိုင်းထားတာ…” “ဆရာရယ်…ကျွန်တော်တို့ ညှောင်းလှပြီ….ဒူးတွေလဲ ချောင်နေပြီ…အိမ်ရောက်ရင် မိန်းမနဲ့ ပြသနာတတ်တော့မယ်ဗျ”
ကျွှန်ုပ် ဒေါသ အလိပ်လိုက်တတ်သွားသည်…..ဒီတရုတ်ကြောင့် စားထားသမျှပေါ်ကုန်တော့သည်။ ကျွန်ုပ် လက်အောက်ရှိ ရဲများကလဲ….ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နှင့် ကျွန်ုပ် ၏ သမာဓိကို လောင်သလို ပြောင်သလို..လုပ်နေသည်…
ကျွန်ုပ်..ဒေါသမှာ..ပိုပြီးထွက်သွားသည်..ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်မှ ပေးအပ်ထားသော…၆လုံးပြူးကိုထုတ်ပြီး တရုတ်ကိုချိန်လိုက်သည်……
ဝူး…တော်သေးတာပေါ့….ဟုကျွနုပ် စိတ်ထဲတွင် တွေးတောနေခိုက်…….ကျွနုပ်၏ ကျွမ်းကျင်လျှင်မြန်မှုကို အခြေခံကာ….ကျွနုပ်အား တစုံတဦးက ကြည့်နေသည် ထင်ပြီး လှည့် အကြည့်……တီရှပ် အင်္ကျီနှင့် လူတဦး.. ဘာလဲဟု ကျွနုပ်မေးမည်ရှိသေး…..ထိုလူက
“ရှေ့ပိုင်းခရိုင်အထူး ရဲတပ်ဖွဲ့…..အကောင်းဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်…ဒေါ်ဒေဝီ…ရောက်ရှိ….သတင်းပို့ပါတယ်” “ညှက်ချာဖျား…….”
“လေ့ကျင့်မှု ပြည့်ဝပြီးသား..ယောင်္ကျားတွေနဲ့ အတူတူ လုပ်နိုင်တဲ့ ရဲမေပါ…..”
“အော်…အခန်းထဲမှာ စောင့်နေ…ငါလာခဲ့မယ်….အထက်ကတော့ ငါ့တွဲဘက်တယောက်ရောက်မယ်ပြောသား” ကျွန်ုပ်လဲ…ကျွန်ုပ်တွဲဘက်၏ အောက်ပါ အရည်အချင်းများအား…ဂလု..ရန်….. သိရှိစေရန်… .ကျွနုပ် အခန်းတွင်းဝင်မည်အလုပ်…
ကျွနုပ်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အသားဖြူဖြူ ဆံပင်ရှည်ရှည်…ပန်းရောင် ဝတ်စုံလေး သေသပ်စွာ ဝတ်ထားသော မိန်းမလှလေးတယောက်…တာဝန်ကျ ကင်းသမားရဲတယောက်က….
ကျွနုပ်ကလဲ မွေးရာပါ အကျင့်အတိုင်း ကောင်မလေး လှလှမြင်လျှင်….အနံပဲခံရခံရ…ဟူသော အကျင့်အရ….ကျွနုပ်ရုံးခန်းထဲသို့ မဝင်ပဲ…..ကောင်မလေးနားသွားပြီး…တာဝန်ကျ ရဲကိုမောင်းထုတ်လိုက်သည် “ဟေ့ကောင်…ကိုယ်အလုပ်ကို လုပ်….သွား…”
“ကဲကဲ…ဒေါ်ဒေဝီ…..နဲ့ တပ်ဖွဲ့ ၁ ဖွဲ့ သွားမယ်ဟေ့”ဟု ကျွနုပ်ပြောပြီး ယု ဆိုသောကောင်မလေး၏အနံခံကာ လိုက်ခဲ့လေတော့သည်။
* တံခါးဖွင့်လိုက်သည် ဆိုရင်ပဲ…….အလောင်းများကို သွေးအိုင်ထဲတွင်…သွေးအလူးလူးဖြင့်တွေ့ရတော့သည်… ယုဆိုသည့် ကောင်မလေးမှာ…အိမ်တွင်းဝင်ပြီး ဧည့်ခန်းရှိ ဆက်တီပေါ်တွင် ငူငူငိုင်ငိုင် ထိုင်နေသည်….ကျွနုပ်၏ အတွေ့ အကြုံအရ…ယောင်္ကျားလေးတဦး…သတ်သွားတာဖြစ်မည်ဟု မှတ်ချက်ချပြီးသကာလ…..ကျွနုပ်၏ လက်ထောက် ဒေဝီအားကြည့်လိုက်ရာ……….ရဲရဲတောက်….သတ္တိရှိလှပါသည်ဆိုသော လက်ထောက်မှာ… လက်ကိုင်ပုဝါ တထည်ဖြင့် မျက်နှာရှိ အရာများကို အုပ်ထားလေသည်….
ကျွနုပ်လဲ မပြောချင်တော့…….လှေကားအောက်နားရှိ အလောင်းကို…..သေချာကြည့်ပြီး “ဒါ လှေကားပေါ်က ကန်ချတာနေမယ်…..တနာစရာ….”
ကျွနုပ်ပြောရင်း လျှောက်ရင်း အိမ်ထဲရောက်သော်လဲ ကျွန်ုပ်၏ လက်ထောက်နှင့် တပ်ဖွဲ့ လိုက်မလာချေ….. သို့နှင့်…
ဒေဝီတယောက် ကျွနုပ်အမိန့် ကိုမလွန်ဆန်ရဲ……အနောက်မှ ကုတ်ကုတ်နှင့် လိုက်လာသည်။(ကျွန်ုမှာ ငယ်စဉ်က သရဲကြောက်သူပိပိ….တယောက်တည်းမတတ်ရဲ၍ဒေဝီကို လှမ်းခေါ်လိုက်ခြင်းသာ….ဤသည်ကား စကားချပ်)လှေကား ထိပ်ဆုံးရှိ အခန်းအား ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်…..ဘယ်သူမှ မရှိ……ထိုနောက် နောက်တခန်းကို ဆက်ဖွင့်ကြည့်တော့…ရေချိုးခန်း….ရေချိုးဇလုံထဲတွင် အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်ရှိ….မိန်းခလေးတယောက် အလောင်း…..လည်ပင်းမှာလဲ တပတ် ပတ်ပြီး ရေထဲတွင် ရေမွန်းပြီး သေသော လက္ခဏာမျိုး…..အောက်က ဘောင်းဘီ အတို အပွ အပေါ်မှ တီရှပ်က လန်တတ်နေပြီး ရင်သား တဝှက်မျှပင်ပေါ်နေတော့သည်…..ကျွန်ုပ်လဲ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် အလောင်းနား ကပ်ကြည့်ပြီး…
နွေရာသီ၏ ပူလောင်မှုကြောင့် ကျွနုပ်…အလောင်းလည်ပင်းတွင် ပတ်နေသော တဘက်ကို ယူလိုက်ပြီး ရေစိမ်ကာ….မျက်နှာသို့ အားပါးတရ သုတ်လိုက်သည်….ထိုနောက် ဒေဝီ ကို မျက်နှာသုတ် တဘက်အားလှမ်းပေးလိုက်သည်….
ဒေဝီက ကျွနုပ်လုပ်သဗျ….မှတ်ရန်….စာရွက်ထုတ်နေစဉ်…..ကျွနုပ်မှာ အလောင်းတွင် ပေါ်နေသော..နို့တဝှက်ကို လက်ဖြင့် ကိုင်ကြည့်မိသည်…..ကိုင်လို့ကောင်းတယ်ဟ….ဟီး ကျွနုပ်၏ သာယာမှု မဆုံးသေခင်….လက်ထောက်မှ လှမ်းပြောလေသည်
ကျွနုပ်မှာ ခပ်တည်တည်ဖြင့် ဆရာကြီးလုပ်ပြီး….စောက်ပက် ကို ကြည့်ချင်သောကြောင့်….ဘောင်းဘီကို အသာလှမ်တင်လိုက်သည်……အမွှေးပင် သိပ်မပေါက်သေး……..လက်နှင့် စောက်ပတ်လေးကို ထိုးကြည့်လိုက်သည်……
ဆက်ရေးပါမယ်….နေမကောင်းပါသဖြင့် 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 သည်မျှလောက်ပင်ကျေနပ်ပါရန် :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
သို့နှင့် ကျွနုပ် နှင့် တွဲဘက် ဒေဝီ တို့ အပေါ်ထပ်မှ အခန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးနောက် အောက်ထပ်သို့ ပြန်ဆင်းခဲ့တော့သည်။ တံခါးဝတွင် ပက်လက် အနေအထားနှင့် သေနေသော အသက် ၄၀ ဝန်းကျင် မိန်းမ တယောက် နားသို့ ကျွနုပ် စစ်ဆေးလေသည်။ သေနတ် ဒါဏ်ရာ ဖြင့် အသက်ပျောက်ပုံပေါ်သည်။ ကျွနုပ်၏ ဝသီ အတိုင်း နို့ ခပ်တွဲတွဲ ကို ကိုင်ကြည့်လိုက်သည်….၄၀ ဆိုပေမဲ့ ကိုင်ကောင်းသေးသည့် အနေအထားမျိုး .. “ကဲ… ဒေဝီ…လိုက်မှတ် ..သေနတ်ဒါဏ်ရာ…..သေဆုံးချိန်…၄ နာရီ ဝန်းကျင်ခန့်”
“တန်….တိတ် …..တယ်လေ….အိုကြီးအိုမ ….မုဒိမ်းကျင့်ခံရစရာလား….ကြည့်ချင် …နင့်ဟာနင်ကြည့်…” တွဲဘက်၏ အတွန့်တတ်မှု ကို ကျွနုပ် အာဏာသုံးပြီး ပိတ်ပြစ်လိုက်သည်…..ကြည့်တော့ ကြည့်ချင်သား….သို့သော် တခြားရဲသား များလဲ ရှိသည်မဟုတ်ပါလား….ကျွနုပ်အားလဲ နှာဘူးကြီးဟု ထင်သွားရင် ခက်ချေမည်။ထို့နောက် ၎င်း အမျိုးသမီး၏ ဝဲဘက် ဒေါင်လိုက် အနေ အထားနှင့် ရှိနေသော အသက် ၄၅ ကျော်ကျော် လူကြီးတယောက် အလောင်း……ကျွနုပ်လဲ ကျွနုပ်၏ တွဲဘက် ကို နိပ်ကွတ်ချင်သောကြောင့်
“ပေါင်ရင်းကို သေနတ် ၃ ချက် မှန်ထားတယ် ဆရာ..ပြီးတော့…..ရင်ဘက်ကို ၂ ချက်….လယ်ပင်းမှာ ဘိုးတော်ရုပ် အကွဲစ..သွေးကြောဖောက်ပြီး ဝင်နေတာ…..နောက်ပြီး…..ခေါင်းမှာ ရိုက်ခွဲ ဒါဏ်ရာ..ပြီးတော့..” “တယ်ညံ့တာပဲ…ဒေဝီ…နင်ဘယ်လိုများ အထူးတပ်ဖွဲထဲရောက်လာလဲ….”
“နင့်ဟာက ဒါဏ်ရာတွေ ရွတ်ပြနေတာလေ….အခြေနေ ကောက်ချက်ဆွဲဖို့က ဒီလိုကြည့်ရတယ်….” ဟုဆိုကာ…ဘောင်းဘီပွပွအောက်တွင် ထိုးထိုးထောင်ထောင်ရှိနေသော အရာကို ဘောင်းဘီအရေကြိုးမှ အသာစွဲမ ကာ ငုတ်ကြည့်လိုက်သည်။
“အေး …ရှက်နေ …နင်အဲလိုရှက်နေ ရဲမလုပ်နဲ့….ကြည့်ထားလိုက်…ရုံးရောက်တာနဲ့
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ထထွက်လာခဲ့သည်။ကျွနုပ်၏ မျက်စိထဲမှာတော့ ခုန က လူ၏ ငယ်ပါကို မျက်လုံးထဲကမထွက်….အတုတ် က ဖီးကြမ်းလောက်ရှိသည်။ အရှည်က ၇ လက်မ သာသာ… လူသာသေသည်….ဒုတ်မသေ….။တွေးရင်းက ကျွနုပ် ဖင်ယားသလိုလို ဖြစ်လာသောကြောင့် သဘာဝဆေးလိပ် ကို ထုတ်ကာ အိမ်ပေါက်ဝသို့ လာခဲ့သည်။
ကင်မရာ ကိုင် သတင်းထောက် တယောက်က ၅ ထောင်တန်တရွက် တာဝန်ကျ ရဲသား ၁ဦးထံ ထိုးထည့်နေသည်။
တာဝန်ကျ ရဲသားကလဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ထည့်လိုက်သည်။ ကျွနုပ်ဆေးလိပ် ထွက်သောက်ချိန်နှင့် အကိုက်တွေ့လိုက်ရသဖြင့်…
တာဝန်ကျ ရဲသားက မကျေနပ်သော်လဲ…ကျွနုပ်မို့ ဘာမှမပြောသာ…ထုတ်ပေးသည်…သိပ် ကျေနပ်ပုံတော့ မပေါ်….။ ကျွနုပ်လဲ ၅ ထောင်တန်ကို အိပ်ကပ်ထဲ ထည့်ပြီး
“လာ….အကို …..အကို့ကိုမျှော်နေတာ….ဟီး……ဒါ ..ငါ့ အကို သတင်းဆရာဟေ့ သူ့ကိုခေါ်သွားမယ်” ကျွနုပ် အသံကောင်းဟစ်ပြီး ညာတာပါတေးနှင့် ကင်မရာ ကိုင် သတင်းသမားကို လက်ဆွဲခေါ်လိုက်သည်။ အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ သတင်းထောက် မှာ အလောင်းများ ကို ဓါတ်ပုံ တဖြတ်ဖြတ်ရိုက်ရင်း “ကျေးဇူးပဲ ဆရာရယ်…မနက်ဖြန်သတင်းမှာ ခေါင်းစဉ်းထည့်ပေးပါ့မယ်ဗျာ…”
ဟုဆိုကာ ဓါတ်ပုံဆက်ရိုက်နေသည်။ကျွနုပ်လဲ ..ကျွနုပ်တွဲဘက် ဒေဝီကို သတိရပြီး ကြည့်လိုက်တော့…စောစောက လူသေ ယောင်္ကျား၏ တုတ်လှပါသည်ဆိုသော ဒုတ်ကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေသည်။ အသက် ၂၅ ဝန်းကျင်ရှိသော ကျွနုပ်တွဲဘက်မှာ လူသေဒုတ်ကို ကြည့်နေသဖြင့် ကျွနုပ် မနာလိုသည့် အဆုံး…
“ကဲ ဒေဝီ…တော်ရုံပဲကောင်းတယ်နော်…မပြောချင်ဘူး…လိုချင်ရင် ဖြတ်ယူလာခဲ့ဟေ့….” “အာ…ဆရာကလဲ ဆရာပဲကြည့်ဆိုလို့….ကြည့်ရသေးတယ်….ခစ်ခစ်..”
“ကဲတော်ရုံလုပ်…ကောင်မလေးကို မေးစရာရှိတာသွားမေး….နောက်ပြီး သူနေဖို့
ကျွနုပ်လဲ ကင်မရာ မြင်ရင် မနေနိုင်သော ရောဂါပိုးကြောင့်…သတင်းသမား၏ အနားသို့သွားကာ “ဟေ့…ငါ့ကို ဓါတ်ပုံတပုံလောက်ရိုက်ပေးစမ်း”
“ဆရာ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ချင်လို့လားဗျ ရိုက်ပေးမယ်လေ”
“အေး ….မင်းကင်မရာနဲ့လဲရိုက် ….ပြီးရင် ငါ့ဖုန်းနဲ့လဲရိုက်ပေးဦး….ဖွဘုတ်မှာ ပုံတင်ရအောင်လို့..ဟီး..” “ဖွဘုတ်မှာ တင်မို့လားဆရာ …အဲဒါဆို …အလောင်းနဲ့ တွဲရိုက်ပါလား..ဟီး …ကျနော်တို့ သတင်းလောကမှာ ရဲနဲ့ အလောင်းတွဲရိုက်တာရှိသေးဘူးဗျ”
“အေး…ကောင်းသားဟ…ကဲကဲ ရိုက်ဗျာ…လှလှလေး နော်”
သို့နှင့် ကျွနုပ်လဲ လူသာသေပြီ ဒုတ်မသေသော အလောင်းအားဆွဲထူပြီး…..လက်နှစ်ချောင်းထောင်… နှုတ်ခမ်းလေးဆူပြီ…ပို့စ်ပေးလေသည်။ သတင်းသမားကတော့ ဓါတ်ပုံ တဖြတ်ဖြတ်နှင့် ဆလယ်ဗတီ တယောက်ရိုက်သလို ရိုက်နေသည် ဆိုရင်ပဲ..ကျွနုပ် ပီတိ….ရင်ဝယ်ထိသွားသည်တမုံ…။ကျွနုပ်လဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးသည်နှင့် ဖွဘုတ်သို့ upload တင်လိုက်ရာ မကြာခင် အချိန် အတွင်းတွင်…like ၃ ခုနှင့် commend ၅၀ ကျော်တို့တက်လာတော့သည်..တကား။(commend 50 ကျော်၍အထင် မကြီးလေနှင့် အဆွေ… ဆဲထားသော commend များသာ ဖြစ်တော့သည်)ကင်မရာ သမားက ကျွနုပ်၏ အမည် ကိုမေးပြီး သတင်းများယူတော့သည်။ ကျွနုပ်လို နာမည်ကြီး နယ်ထိန်းတယောက်ဖြစ်သည့်အတွက် ကျွနုပ် အမည်ကို ပြောရန် ကျွနုပ်၏ ၉၉၉ ယောက်သော တပည့်ထဲမှ အတော်ဆုံးထဲမှ တယောက်ဖြစ်သည့် ရဲဘော် ကုန်းအော်(ဘုန်းကျော်)အား ကျွနုပ်အကြောင်းနှင့် အမှု အကြောင်း ပြောခိုင်းပြီး….ကောင်မလေး အနံခံရန်…ယု ဆိုသော ကောင်မလေးနား သွားတော့သည်….တမုံ။
ကျွနုပ်နှင့် လူသာသေ ဒုတ်မသေသော…လူနှင့်တွဲရိုက်ထားသော ပုံနှင့်တကွ သတင်းကြီးမှာ မြန်မာ့ အမှောင်သတင်းစာ ခေါင်းစီးပိုင်းတွင် နေရယူထားတော့သည်။ သတင်းစာပါ အကြောင်းအရာများကိုမူ စခန်းရောက်မှ ဖတ်မည်ဟု စိတ်ထဲတွေးရင်း..တအိမ်လုံးတွင် တဦးတည်းသာ ကျန်သော ယုဆိုသော မိန်းမလှလေး
ရှိရာ…ဒေဝီသူငယ်ချင်းနေအိမ်သို့ အမှုအသွားအလာအား မေးရန် ရောက်နေလေတော့သည်။ ကျွနုပ်မှာ သတင်းစာကြီးကို ဂျိုင်းတွင် လိပ်ထည့်ကာ ယု ဆိုသောမိန်းခလေးကို စတင်ပြီးမေးမြန်းတော့သည်။ “အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့မှာ ဘယ်ရောက်နေလဲ…ဘယ်သွားခဲ့လဲ..”
ကျွနုပ်နှင့် ဒေဝီလဲ ….မေးစရာ ရှိတာတွေ သိချင်စရာရှိတာတွေ ထပ်မေးပြီး စခန်းသို့ ပြန်ခဲ့တော့သည်။
“ဒါဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ…ပြော….ငါအရင်စိတ်နဲ့ဆို မင်း သေနေလောက်ပြီ…တောက်..” “ဆရာရယ် ကျနော် ဆရာ နာမည်ကို ပြောတာအမှန်ပါပဲ…သူ နားကြားလွဲသွားတာဖြစ်မယ်” “တန်…တိတ်….ခုတော့ ကောင်းသေးလား ..တနိုင်ငံလုံးဖတ်တဲ့ မြန်မာ့ အမှောင်သတင်းစာလေ….” ကျွနုပ် ဒေါသထွက်တာလဲ မပြောနဲလေ….လုပ်ပုံကို ကြည့်ဦး……နယ်ထိန်းစုံထောက်ကြီး ဦးမဲပြောင်နဲ့ လူသေ ဒုတ်တို..တဲ့လေ…။တကယ်ဖြစ်ရမှာက နယ်ထိန်းစုံထောက်ကြီး ဦးမင်းနောင်နဲ့ လူသေ တုတ်ချို……။ “ကဲ…ကုန်းအော်…ဘယ်လိုရှင်းမလဲ….ဒါပဲပြော…”
“ဝမ်းသာလိုက်တာ ဆရာရယ်..ဒါဆို အခုတည်းက အဖေပါပါ လို့ခေါ်တော့မယ်နော်…ဆရာ အဖေပါပါ…” “အွန်”….ကျွနုပ် ဆက်မပြောချင်တော့ ရယ်ဒီမိတ်တွေ ပေါနေသာခေတ်ထဲတွင်…..ရယ်ဒီမိတ်..သားသမီးများ ချွေးမ များ ကံသိပ်ကောင်းလျှင်…မြေးလေးတောင် အဆစ်ပါနိုင်သေးသည်.။ကျွနုပ် လူပျိုကြီးမှာ… တပည့်ကုန်အော်စကားကြောင့် ခွေးအကြီး လှည်းနင်းသလို ..အသံပင် မထွက်နိုင်ရှာတော့သည်တမုံ…။
ကျွနုပ်နှင့် ရဲဘော်ကုန်းအော်တို့ ကျွနုပ်ရုံးခန်းတွင် သတင်းစာ ကိစ္စရှင်းနေသည့် တချိန်တည်းတွင်….. “ဘာလဲဗျာ အိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာ့ကိုယ် အေးဆေးနေတာကို……”
ယောင်္ကျားများ မိန်းမကြီး ၄ လောက်လောက်ပါသော လူတစု ရဲစခန်းထဲသို့ ဆူညံ ဆူညံဖြင့် ဝင်လာလေသည်။ နောက်ဆုံးမှ လူရွယ်တယောက်…ဂျစ်ကန်ကန် နှင့် ဝင်လာလေသည်။
“ကဲကဲ …တော်ကြတော့….ဆူညံနေတာပဲ…ရော ဝန်ခံကတိမှာ လက်မှတ်ထိုး…”ဟု ဒေဝီ အော်လိုက်သည်။ လူရွယ်က သူ့ရှေ့တွင်လာရောက် အာဏာပြနေသော…ရဲမေလေးအား မခန့်လေးစား..ထပြီး “ခင်ဗျားက ဘာလဲဗျ….ရုပ်ကလေးကြည့်တော့ သနားကမားနဲ့ ..အာဏာလာပြနေတယ်” “ကျမက ဘာလဲဟုတ်လား….ဘာလဲသိရအောင် လိုက်ခဲ့လေ….ဟားးးး….”
“သွားတာပေါ့…….ဘော်ဒါတို့ရေ…ငါတော့ ထီပေါက်ပြီ..ဟား….ရဲမေလေးကို ပညာပြရသေးတာပေါ့…”ဟု ကျန်ခဲ့သောလူများကို မထိတထိ ကလိသွားသေးသည်။ဒေဝီသည် လူငယ်အား အခန်းထဲဝင်ရန်.. အခန်းဝတွင် ညွှန်လိုက်ပြီး အခန်းဝတွင် မက်တပ်ရပ်နေသည်။လူငယ်ကလဲ စပ်ဖြီးဖြီးဖြင့်…အခန်းတွင်းသို့ ဒေဝီနှင့် အတူ ဝင်သွားသည်။ကျန်ခဲ့သူများက ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် ကျန်ခဲ့တော့သည်။ အခန်းထဲဝင်သွားပြီး ခဏအကြာတွင်…..အောင်မလေးဗျ…သေပါပြီ…အမေရေ..သားကို ကယ်ပါဦး…..အမလေးဗျ….ဟူသော အသံတို့ ထွက်လာတော့သည်။ အသံများ ရပ်သွားချိန်တွင်….ဒေဝီတယောက် အခန်းထဲမှ ချွေးတလုံးလုံးနှင့် အင်္ကျီခေါက်တင် ရက်သားနှင့် ထွက်လာလေသည်။နောက်မှ လူငယ်မှာ..မျက်နှာတခုလုံး နီးပါးနှင့် ရင်ဘက်တို့တွင် အနီအညို အကွက်လိုက်နှင့် အခန်းတံခါးအား မှီပြီး မေ့လဲသွားတော့သည်။ဒေဝီမှ
စောစောက မေ့လဲနေသောလူငယ်ကို ဒေဝီမှ သတိပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် လူငယ်ထံသို့ ဒေဝီ တစ်ရှူးကမ်း ပေးလိုက်သည်။ လူရွယ်မှ
ဟု…ကျွနုပ် ခပ်တည်တည်နှင့် ဟောက်စားလုပ်လိုက်သည်။ ကိုလေး ဆိုသော ရဲသားမှာ ဘော်ဒီခပ်တောင့်တောင့်….နှင့် အတော်ကြည့်ကောင်းသူပေတည်း။ကျွနုပ်တွဲဘက်မှာ
ကိုလေးနှင့်ပြောနေရင်း….မူသလို နွဲ့သလို အမူအရာများပါနေသောကြောင့် ကျွနုပ် လူပျိုကြီး ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ကျွဲမှီးတိုပြီး ဟောက်စားလုပ်လိုက်ရခြင်းပေတည်း။
အမှုအိမ်ကြီးနှင့် ကျွနုပ်၏ ဝါရင့် ကောက်ချက်စွဲမှု မှတ်တမ်း
ကျွနုပ် အမှုဖြစ်သော အိမ်ကြီးကို တချက်ကြည့်လိုက်သည်။ ပုံစံက ၂ ထပ် တိုက်လေး…. အိမ်အမှတ်ကြည့်လိုက်သည် …..ပြီးတော့ တချက်ပြုံးလိုက်သည်….ထိုအချင်းအရာကို မြင်သော ဒေဝီမှာ …
ဟု ဆိုကာ ကျွနုပ် လက်ဖြင့် တံခါးကို တွန်းဖွင့်လိုက်သည်….မပွင့်….ထပ်တွန်းသည်…မပွင့် ….ကျွနုပ်သည်ကား..စိတ်မရှည်နိုင်တော့…..နောက် ၅ လှမ်းခန်းဆုပ်ပြီး အရှိန်နှင့် တွန်းဖွင့်ရန် ပြေးအလာ… “ဟိုး…..ဆရာ……”
ဒေဝီအသံနောက်ကျသွားချေပြီ……ကျွနုပ် ပုခုံး နာကျင်သော ဝေဒနာ ဆူးခနဲ ဝင်လာသည်…..အတော်နာသွားပြီးမှ ဒေဝီက
ကျွနုပ်လဲ ပုခုံးလေး ပွတ်ရင်း…..ဒေဝီဖွင့်ပေးသော..အိမ်ထဲသို့ ဝင်လာခဲ့သည်…..အိမ်ထဲတွင် မနေ့တုန်းကလို လူသေအလောင်းများနှင့် ပြည့်မနေပဲ ရှင်းလင်းနေတော့သည်….
ဟု ဆိုကာ ကျွနုပ်ဦးဆောင်ပြီး အပေါ်ထပ်ရှိ ရေချိုးခန်းတွင် သေနေသော ၁ ဦးတည်း သော အလောင်းရှိရာ အခန်းသို့ လာခဲ့တော့သည်။
“ဆရာ…လူသတ်သမားက ဘယ်လို ဝင်သတ်သွားလဲ မသိတော့ဘူး….အောက်ထပ်ကဆိုရင်လဲ ယောင်္ကျားရင့်မာ ၂ ယောက်တောင်ရှိတယ်…….”
“အသံမထွကိနိုင်အောင် တဘက်နဲ့ ပတ်မယ်…..တဘက်ပါလား ..လက်တွေ့ပြမယ်….” ဒေဝီက တဘက်လေးထုတ်လိုက်သည်။ ကျွနုပ်လဲ…ဒေဝီလက် ၂ ဘက်ကို အပေါ်သို့ ကားပြီး မြှောက်လိုက်ကာ… နုတ်ခမ်းချင်း ထိပြီး နမ်းလိုက်သည်။ ကျွနုပ်၏ လျှင်မြန်သော အပြုအမူကြောင့် ဘာမှ မတတ်နိုင်ရှာတော့ပေ။ ကျွနုပ်လဲ …ဒေဝီကို တပတ် ဆွဲလှည့်လိုက်ပြီး လက်၂ ဘက်ကို လက်ပြန် တုတ်ပြီး လက်နှင့် ပါးစပ်ကို ပိတ်ကာ….ရေချိုးကန်ထဲသို့ ဆွဲလှဲလိုက်သည် ဆိုရင်ပဲ……
ကျွနုပ်၏ အောက်ပိုင်း ရှင်းရှင်းပြောရင် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းကို တခုခုနှင့် ဆောင့်ကန်လိုက်သည့် အောင့်တောင့်တောင့် ခံစားမှု ဝေဒနာ…..။ဒေဝီမှာ သာမန် မိန်းခလေး မဟုတ်မှန်း ကျွနုပ် မေ့သွားသည် မဟုတ်ပါလား…..။
ကျွနုပ် ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ လုပ်နေရတော့သည်။…ဒေဝီမှာ ရေချိုး ဇလုံထဲမှ ထပြီး ကျွနုပ်အား “အမှု ကို ဘယ်လို ကောက်ချက်ဆွဲ တင်ပြလိုက်ရ မလဲ ဆရာ”
ထိုနောက် ..အိမ်အောက်သို့ ကျွနုပ် အောင့်နေသော အရာ ကို လက်ဖြင့် အုပ်ပြီး ဂွတဂွတ နှင့် အိမ်အောက်ထပ်သို့ ဆင်းခဲ့တော့သည်….
ဟု ကျွနုပ် ဆိုလိုက်ရာ ဒေဝီခေါင်းကုတ်ပြီ..
“ဒါဆို …လှေကားရင်းက ကောင်လေးက ချွန်ထက်တဲ့ အရာ ထိုးမိပြီးသေတာလေ…ဆရာ” “တယ်လေ..ငါ့စကားတောင် မဆုံးသေးဘူး…သေနပ်နဲပစ်ပြီး…လှေကားနားလာမယ်…
“အဲဒါက သူယောင်္ကျားသေနေတာမြင်လို့ ထွက်ပြေးတာ…ထွက်ပြေးတုန်းပစ်တာပေါ့..” “ဒီလိုဆို ကောင်လေးက ချွန်ထက်တာနဲ့ နောက်ကျောကို ထိုးမိတာက…”
” @#$^%&^&*#@%^&()&%^$# တော်ပြီ..ပြန်မယ် …မနက်ဖြန် အထက်ကို ရီပို့ကြည့်တင်လိုက်တော့” သို့နှင့် ကျွနုပ်နှင့် ဒေဝီတို့ ပြန်ခဲ့ကြသည်။
“ညလေးတို့ကလဲကွာ…ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ ၁ သိန်းလား ၂ သိန်းလား….၂ဆယာက်လုံးနော်” အသက် ၃၅ ဝန်းကျင် လူကြီးမှ အသက် ၂၀ ပတ်ချာလည်လောက်သာရှိသော ကောင်မလေး ၂ ယောက်ကို အတင်းဈေးလိုက်ညှိနေတော့သည်။ကောင်မလေး ၂ယောက်က သနားကမား သားသားနားနား….. ထိုလူကြီးသည်..ကျွနုပ်နှင့် ဒေဝီအားတွေ့လိုက်သည်နှင့် နှစ်၂၀၀ လောက်ဝေးနေသော သားမှ အဖေ ကို တွေ့လိုက်ရသော မျက်နှာ မှိုအပြင် မြွေပါ တွေ့သော မျက်နှာမျိုးဖြင့် သံပရာသီး ချိုချဉ်ကို ငရုတ်သီးဖြင့်စားရသော ရုပ်မျိုး အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားကာ မချိုမချဉ်မငန်မစပ်မျက်နှာဖြင့်….
“ဟဲဟဲ..ဆရာတို့ ဘယ်ကပြန်လာလဲဟင်….ကံကြုံလို့ ဆုံရတာ..ဝမ်းသာစရာကြီး”
ဟု မျက်မှန်ကြီးပင့်ပြီး နှာခေါင်းနီကြီးဖြင့် အားပါးတရ မရှိ အသက်မပါသလို နှတ်ဆက်လေသည်။ကျွနုပ်လဲ သူ့ကို ပြန်မနုတ်ဆက်ခင်…..ကောင်မလေး ၂ ယောက်ဘက်လှည့်ပြီး
ကျွနုပ်၏တွဲဘက် ဒေဝီသည်…ခြေမြန်လက်မြန်ချက်ကတော့ ပြောစရာပင်မလို…လက်သီးရော ခြေထောက်ပါမကျန်…ထိုလူသို့ ပစ်ဝင်သွားတော့သည်။ဒေဝီသာ ယောင်္ကျားလေး ဖြစ်ရင်တော့ ဒီလိုခြေမြန်လက်မြန်မျိုးသာဆို ကောင်းမလေးတွေ သူရှေ့တောင်ဖြတ်မလျှောက်ရဲလောက်ဟု တွေးကာ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့…
ဟု ကျွနုပ် အခန်းထဲမှ ထိုင်နေသော မိန်းမကြီးမှ ဆီးကြိုနုတ်ဆက်လေသည်။
ထိုမိန်းမ မျက်နှာမှာ ခုနက စကားပြောလိုက်ရသည့်အပေါ်ပဲ သဘောကျသလား….ဘာလားတော့မသိ..ဟီးဟီးဟု ဆိုကာ ကျေနပ်သလို ကျွနုပ်အား ပြုံးပြလေသည်။ ကျွနုပ်မှ စကားပြောမည်ဟန်ပြင်ကာရှိသေး….. “မပြောချင်ပါဘူးဆရာရယ်…ဒင်းကလေ………………@#$%^&*^%$
နားညီးမှုဒဏ်ကို မခံနိုင်သည့်အဆုံး အာမခံပေးပြီးပြန်လွတ်တော့မှ ကျွနုပ် နားချမ်းသာရာ..ရတော့သည်။ ကျွနုပ် နာရီကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ နေ့လည် ၁၂ နာရီစွန်းစွန်း….
အခင်းဖြစ်ပွားသည့် အိမ်၏လမ်းထိပ် ကွမ်းယာဆိုင်တွင် ကျွနုပ် အခြေအနေကို သိရန် အလို့ငှာ… ကွမ်းယာဝင်ဝယ်ရင်း အမှု၏ လမ်းကြောင်းအား စတင် မေးမြန်းလေသည်။
ကျွနုပ်လဲ ခေါင်းဆက်ဆက်ငြိမ်ပြီး ပြောင်းဖုးထုပ် ကို ကိုင်ကာ..အလှပြင်ဆိုင်ဘက်သို့ ခြေဦးလှည့်ခဲ့သည်။ အလှပြင်ဆိုင်ထဲ…ကျွနုပ်ရောက်ရင်ပဲ….
ထို အချိန်..ကျွနုပ်၏ ၁၅၀၀ တန် ဖုန်းမှာ လိုင်းမမိစဖူး မိလာပြီး ထအော်ပါတော့သည်။…..ကယ်ကြပါဦးရှင်…. ကယ်ကြပါဦးရှင်…….ကယ်ကြပါဦးရှင်…..။ကြည့်လိုက်တော့ ဒေဝီမှ ဆက်သော ဖုန်းဖြစ်လေသည်။ကျွနုပ်မှာ ဒေဝီကို ကြိတ်ပြီးကျေးဇူး တင်လိုက်သည်။မဟုတ်ပါက ရေတိန်နှစ်တော့မည့်ကိန်းဆိုက်မည်မဟုတ်ပါလား။ ဒါတောင် အလွတ်မပေးချင်…လှမ်းပြောသေးသည်..ဒီနေ့ ဖီးကြမ်းတဖီး လွတ်သွားတယ် တဲ့….။ကျွနုပ်လဲ အလှပြင်ဆိုင်မှ အမြန် ထွက်ပြီး ဖုန်းကိုင်လိုက်သည်။
“ဟယ်လို ..ဟယ်လို ..လမ်းသွယ် ဘယ်လောက်လဲ…ကြားလား…ဟယ်လို….ဟယ်လို….” ဖုန်းကျသွားသည်။ကျွနုပ် ပြန်ခေါ်ကြည့်တော့ မိန်းတဦးအသံကြည်ကြည်လင်လင် ထွက်လာသည် “လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုသော ဖုန်အားဆက်သွယ်ရန် မလုံလောက်တော့ပါသဖြင့် ထပ်မံငွေဖြည့်သွင်းပါရှင်” ငှင်……သေစမ်း ဟု ကျွနုပ်စိတ်တွင် ညီးညူလိုက်သည်။ ဧရာဝတီလမ်းသွယ်မှာ စုစုပေါင်း လမ်း ၂၀ ရှိသည်။ ဒါတောင် ဟိုဘက်ဒီဘင်လမ်းသွယ်များဖြစ်သည်။ တွက်ကြည့်လျှင် လမ်းသွယ်ပေါင်း ၄၀ ကိုရှာဖွေရတော့မည်။ မတတ်နိုင်ဘူးလေ မြန်မာပြည်တွင် လူဖြစ်ရသော ဒုခ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ပင်ဖြစ်တော့သည်
ဒေဝီမှာ ကျွနုပ်အား ဘာမှ မပြောသာပဲ ဖုန်း၂ လုံး ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးခေါ်ကြည့်သည်….တခါ.. နောက်တခါ..နောက်တခါ…..အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ကြည့်သော အခါ အကြိမ်ကြိမ် ပါးစပ်မညောင်းနိုင်ပြန်ဖြေလေသည်… … စာဖတ်ပရိတ်သတ်များဗဟုသုတရစေရန် အလိုငှာ တင်ပြလိုက်ပါသည်..၎င်းတို့မှာ..
ကျွနုပ်နှင့် ဒေဝီမှာ ဖုန်းကလိနေတုန်း ယုဆိုသော မိန်းကလေး ရေးကြီးသုတ်ပြာဖြင့် ဆေးခန်းအပြင်သို့ ထွက်သွားတော့သည်တမုံ။ ကျွနုပ်ကတော့ ယု ဆိုသော မိန်းခလေးကို နောက်ယောင်ခံလိုက်ခဲ့သော်လဲ ဒေဝီမှာ ညနေမှောင်ရိပ်ပျိုးနေပြီဖြစ်သဖြင့်…..ပြန်လွတ်လိုက်တော့သည်။
မျက်ရည်များသုတ်သည့်ပုံရိပ်တို့. .တွေ့နေရသည်။ကျွနုပ်လဲ သူမ နောက်မှ နောက်ယောင်ခံလိုက်ရတော့သည်။ သူမက ခပ်သုတ်သုတ် …ကျွနုပ်ကတော့ ပြောင်းဖူးထုပ်အရမ်းရမ်းနှင့်လိုက်ရသည်။ ထူးဆန်းတာက ရဲဝန်ထမ်းများကို အရကျစ်(တနည်း)အရစ်ကျ နှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးထားသော..တိုက်ခန်း အိမ်ရာဘက်သွားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ကျွနုပ်လဲ သူမနောက်လိုက်သော်လဲ..တိုက်ခန်းလှေကားသို့ ဝင်သွားသည် ဖြစ်ရာ ဆက်လိုက်ရန် မသင့်တော်တော့ဟု တွေးမိပြီး….ကျောဘက်တိုက်ပေါ်သို့ တတ်လာခဲ့သည်။ ကျွနုပ်မှန်းကြည့်ပုံအရ ပထမထပ်သို့ တတ်သွားသသည့်အတွက်….မှန်းတိုင်းလွဲနေသာ ကျွနုပ် လူပျိုသိုးကြီး၏ ထုံးစံအတိုင်း ဒုတိယ ထပ်သို့ တက်ခဲ့တော့သည်။ ဓါတ်ကျရာ အခန်း တခန်း၏ တံခါးဝ အရောက်..တံခါးခေါက်လိုက်သည်။…ဒေါက်.. ဒုတ်.ဒုတ်..ဒေါက်..ဒုတ်ဒုတ်..(ပြောင်းဖူး၂ ဖူးပါသော လက်ဖြင့် ခေါက်မိသဖြင့် ပြောင်းဖူး၂ ဖူးနှင့် တံခါးထိသံပါ ထွက်နေသော အသံ) …ဒေါက်..ဒုတ်ဒုတ်…။အိမ်ထဲမှ နဖူးပြောင်ပြောင်..ဆံပင်ဖြူဖြူနှင့် အသက် ၆၀ ခန့်ရှိသော အဖိုးကြီးတဦး..ဒေါကြီးမောကြီးဖြင့်……ဆို့နေသာ ချွေးများ ကို လက်ဖြင့်သပ်ရင်း……
“အော် ..ဆရာလေးကလဲ အရွယ်လေးရှိတုန်း..နောက်..သားသမီးတွေမရှိတုန်း….ချစ်လေးနဲ့ ချစ်ရေလူးနေကြတာလေ..ဟဲဟဲ.. “
လူကြည့်တော့ မနက်ဖြန် သဘက်ခါပဲ သေတော့မယ် …အရွယ်ရှိတုန်းတဲ့….ချစ်လေးနဲ့ တဲ့ ..နွားအို မြက်နုကြိုက်လို့ ပြောရမလား…ဒါမှ မဟုတ်….သေခါနီး ရိက္ခာယူတယ်ပဲပြောရမလား….သူငယ်ပြန်တယ်.. နောက်မီးလင်းတယ်ပဲ… ပြောရမလား….တွေးနေတုန်း အသံတသံထွက်လာသည်….
ထမီဇောက်ထိုးရင်ရှား…ဆံပင်ဖြူဖြူ ဖို့ရို့ဖားရား…ချွေးဆို့ဆို့ နှင့် အိပ်ခန်းထဲမှ ရှင်မွှေးနွန်း ပုံ ဖမ်းပြီး ထွက်လာသော အသက် ၆၀ နီးနီးရှိ အဘွားအိုကြီး ..ကျိုးနေသော..၃၂ ချောင်းတွင် ၂ ချောင်း ၃ ချောင်းသာ ရှိတော့သော..သွားများ အကုန်ဖြဲပြပြီး ကျွနုပ်အား ရှက်ပြုံးလေးတောင် ပြုံးပြနေသည်…။
“ဟုတ်ကဲ့….ဟင်…မကြည့်ချင်ပါဝူး….ဟို ကြည့်မယ်….အာ….ရှုပ်ကုန်ပြီ…ကဲ အဘ အရှေ့ကကြွပါဗျာ” သို့နှင့် ဝရံတာသို့ ရောက်ခဲ့သည်။ ကျွနုပ် ကျိုတင် တွက်ဆ ထားသည့်အတိုင်းပင်…ကောင်မလေးမှာ ပထမထပ်..မီးဖို ချောင်တွင် လူရွယ်လေး တဦးနှင့် အတူ ပွေ့ဖက်နေကြသည်။ အခြေအနေကို အကဲခတ်ပုံအရ ယု ဆိုသော မိန်းခလေး၏ ချစ်သူ ဖြစ်တန်ရာသည်။ သူတို့ ၂ ဦး ပွေ့ဖက်ကာ…အနမ်းမိုး တွေ ရွာသွင်းနေပြီ… တဖြည်းဖြည်း လူရွယ်၏ လက်မှာ ကောင်မလေး၏ ကျောနှင့် တင်လုလု အိုးပြည့်ပြည့်ကို ပွတ်သပ်နေလေသည်။ နမ်းနေရင်း အဝတ်များကို လူရွယ်မှ တလွာချင်းချွတ်ချနေလေပြီ…လူရွယ် မျက်နှာ ကို လှန်းတွေ့ရပြီဆိုရင်ပဲ ” ဟင်..ဒါ…ဒါ…ကိုလေး…ရဲသား ..ကိုလေးပဲ…..”
ဟု စိတ်ထဲမှ ရေရွတ်လိုက်သည်….ကိုလေးမှာ ယု ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်များကို တလွာချင်းချွတ်နေသည်မှာ ကိုလေး တွင် အောက်ခံဘောင်းဘီမျှသာကျန်ပြီး ယုတွင် ဗလာစီယာ နှင့် ဘောင်းဘီ အပြာရောင် ခပ်နုနုကလေးသာ ကျန်တော့သည်။ အနမ်းများ ခဏခွာပြီး စကားအနဲငယ်ပြောဟန်ရှိသည်… ထို့နောက်..ရေချိုးခန်း..ထဲသို့ ရွှေလက်တွဲကာ ဝင်ကြသည့် ပုံမျိုး မြင်ရသည်။ကျွနုပ်လဲ ရေငတ်သလို ရှိသည့် အတွက် အဘိုးကြီးအားကြည့်လိုက်ရာ….ဝရံတာ လက်တန်းပေါ်တွင် မက်တပ်ရပ်နေသော…အဘိုးကြီးမှာ မျက်လုံးကျွတ်ထွက် မတတ်…ကြည့်နေလေသည်..
မှန်ပါသည်….ယု၏ ရင်ဘက် မို့မို့ ထက်မှ ပန်းရောင်လေး ဖြစ်နေသာ နို့သီးခေါင်းလေးကို ကိုလေးမှ စို့နေပြီး လက်တဖက်မှ အမွှေးရေးရေးရှိ ကွဲကြောင်းလေး ကို ကလိနေသည်…ယု မှာလဲ မျက်လုံးလေးမှိတ် နုတ်ခမ်းလေး တစောင်းကိုက်ရင်း…ဖီးအပြည့် ယူနေတော့သည်။ထို့နောက်…ကိုလေးသည်…ယု၏ နောက်ဘက်မှ နေရာယူပြီး နို့ ၂ လုံးကို ကိုင်ကာ ယု ၏ ကုတ်ကို စုတ်နေလေတော့သည်။….ယုကလဲ လက်ကို နောက်ပြစ်ပြီး ကိုလေး ၏ လီးကို..ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ရင်း အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ချစ်တင်နှောနေကြသည်။ ထို့နောက်..ကိုလေးသည် ယု၏ ကျောကို အနဲငယ် ကိုင်းစေပြီး နောက်မှ ထွက်နေသော ခပ်မို့မို့ စောက်ပက်ကို လီးကိုင်ပြီး ထိုးသွင်းလိုက်သည်…အ…အား…..ဟူသော အသံတို့ ကျွနုပ် နားထဲမှ ကျွနုပ် အသိထဲသို့ ပြန့်နှံသွားလေပြီ…..။ကိုလေးမှာ ယုကို နောက်မှ ခပ်မှန်မှန် ဆောင့်လေသည်….ရေပန်းမှ ရေတို့က တဖွဲဖွဲနှင့် ချစ်သူ ၂ ဦး၏ ကိုယ်ခန္ဒာပေါ်သို့ ကျနေသည့်တိုင် ထိုသော ချစ်သူ ၂ ဦး၏ ချစ်ခြင်းတို့ကို ရပ်တန့်သွားရန် မစွမ်းသာပေ။ ဗိုလ်ထိုင် အိမ်သာ ဖုံးလေးပေါ်တွင် ကိုလေးမှ ထိုင်ပြီး အပေါ်မှ တတ်ခွပြီး ခပ်ငြိမ့်ငြိမ့်လေး လှုပ်ရှားနေသော ယု…..ယု ကိုယ်ပေါ်ကျလာသော ..ရေစက်လေးမျာက ခေါင်းမှ လည်တိုင် တလျှောက်..ပြီးတော့ ပုခုံး…… ရေးလမ်းချောင်းလေး စီးပြီး နို့သီးခေါင်းလေး ပန်းရောင်ထိပ်က ရေစက်…ကိုလေးမှ လျှာထိပ်လေးနှင့် ခံယူ…………… ………………………………….ကျွနုပ် ဆက်မကြည့်နိုင်တော့….မျက်နှာလွဲလိုက်သည့်အချိန်… “သေပါပြီ ဗျ…..”……….ဝုန်း……..
ဟိုက်…ကျွနုပ်မေ့ပြီး လက်လွတ် ဒီဘက်လှည့်လိုက်ရာ လက်မှ လွတ်ပြီး အဘိုးကြီး ပြုတ်ကြသွားပါရောလား…။ ငါတော့ နေရင်းထိုင်ရင် အမှုတွဲထဲပါပြီဟု တွေးပြီး အောက်ကြည့်လိုက်တော့ အမှိုက်အိတ်တွေပေါ် ပက်လက်ကလေးကျနေတဲ့ အဘိုးကြီး…..
“သေနာလေး…လွတ်ချရလားဟ…လဖွတ်…..လာတွဲအုံး ..အောင်မလေး…ခါးကျိုးပါပြီဗျ………………” **** *** ** ** *** *** * **** *** * *** * *** * **** * *** * *** ** *** ** ရဲဘော် ကိုလေး ကျွနုပ်ရှေ့တွင် ခေါင်းငုံပြီး ထိုင်နေသည်။ဘေးတွင် ဒေဝီက စာအုပ်နှင့် ဘောပင် အသင့်
ကိုင်ထားသည်။ ကျွနုပ် စာပွဲအံဆွဲ မှ ကိုလေး သေနပ် ထုပ်ပြီး ကိုလေးရှေ့ချလိုက်သည်။ “ကိုလေး…..မင်း ကျည်ဆံတွေ လျှော့နေတယ်……အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ….”
ကျွနုပ် ထိုင်နေရာမှ ထပြီး…
“မင်းဟာ ..ငါတို့စခန်း….ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်…ထူးချွန်တဲ့လူငယ်….အခု ပရိုမိုးရှင်းအတွက် အထက်ကိုတောင် စာတင်ထားတာ……မင်းကွာ..တောက်……”
“မင်းကွာ……အေး တရားလိုဘက်ကနေပြီး ငါကိုယ်တိုင် မင်းကို တရာစွဲမယ် ခွေးမသား…..” “လုပ်ပါဆရာရယ်…..ကျွန်တော် ကို အပြစ်ပေးပါ……လက်ထိပ်ခတ်ပါ ဆရာ”
နားလည်သူ. .တာဝန်သိတတ်သူ……..အလုပ်တခုတည်းသာ အာရုံစိုက်လုပ်တတ်သူ…….ထူးချွန်သော ရဲသားတဦး… ကျွနုပ်လို နယ်ထိန်းတဦးပင် တခါတရံ ကိုလေး ၏
အကြံဉာဏ်တောင်းယူရတုန်း..အပေါင်းအသင်းများက ခေတ်သစ် ဆားပုလင်းနှင်းမောင်ဟု ခေါ်ခြင်းပင် ခံရသူ….သူ့ဒေါသအလျောက်ဆိုတာကို ကျွနုပ် မယုံနိုင်..။
ယု ဆိုသော မိန်းခလေးမှာ ရဲသားများ ဆွဲထားသည့်ကြားကျွနုပ်ရုံးခန်းထဲ ဝင်လာလေသည်။ “ချစ်..လာလို့ လိုက်လာတာလဲ…..ဆရာ ကျွန်တော့် ကို မြန်မြန် ဖမ်းပါ….ယု ကဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူး… ကျွန်တော်သတ်တာပါ……ဖမ်းပါဆရာရယ်”
“တော်ပါတော့ အကိုရယ် ယု အပြစ် ယု ပဲခံပါ့မယ်…..ကျမကို ဖမ်းပါ…ကျမသတ်တာ…..” “သူလျှောက်ပြောနေတာ ဆရာ…ကျွန်တော်သတ်တာ..ကျွန်တော်ကိုဖမ်းပါ..ဆရာ….”
“တော်………………တိတ်……..”ကျွနုပ်မှ ထအော်တော့မှ ၂ ယောက်လုံးငြိမ်သွားတော့သည်။ “ကိုလေးကို အချုပ်ခန်းထဲ ခဏ ပို့ထားလိုက်..ကောင်မလေးကို ခေါ်လာလိုက်……”ဟု ကျွနုပ် အမိန့်ပေးလိုက်သည်။ “ယု….ချစ်……”
ချစ်သူ ၂ ဦး၏ လက်တို့ တဦးနှင့် တဦး ဆွဲထားသည်..ရဲသားတို့၏ အားနှင့် လက်၂ ဘက်ပြုတ်သွားသော မြင်ကွင်း……လေညှင်းလေးက အချိန်အခါ မဟုတ် တချက်တိုက်လိုက်ချိန်……..ဝမ်းနည်းမှု….တို့ နှင့် ချစ်သူ ၂ ဦး၏ ပုံရိပ်….မျက်ရည်ဝဲနေသော ကိုလေး မျက်လုံး မျက်ရည်ရွှဲနေသော ယု မျက်လုံး …အရာရာ အားလုံးကို နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ လေညှင်းလေးတချက် နဲ့ လက်တွဲပြုတ်သွားသော လက် ၂ ဘက်……….။…………။
လ သာသာ ရှိသေးသည်။ အချိန်ကသာ ၂ လ တွေ့ရသည့်အချိန် ပြန်တွက်ကြည့်လျှင် ၃ နာရီပင်မရှိသေး..ကိုလေးက ရဲသား တဦး ဖြစ်နေတော့…သူတာဝန်က လဲ အများသားမဟုတ်လား ..ယုကလဲ အထည်ချုပ်ဆိုတော့ မနက် ၇ နာရီဆို စပြီး အလုပ်ထဲရောက်နေပြီ…ည ၈ နာရီမှ တခါတလေ ၉ နာရီ မှ ဆင်းရသည်။ အိမ်မှာလဲ မနေချင်တာကြောင့် ယု တယောက် ပိတ်ရက် မရှိ အလုပ်ဆင်းသည်။အိုဗာတိုင် ကြေးက သိပ်မရသော်လဲ အိမ်မှာ မနေချင်တာကြောင့် အားတိုင်း အလုပ်ထဲ လာလေသည်။ ယု ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘ ၂ ပါးတို့ နယ်ခရီးထွက်စဉ် ကားမှောက်ပြီး တိမ်းပါးခဲ့သည်။ အိမ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ ဒေါ်လေး ဖြစ်သူနှင့် သူယောင်္ကျားတို့က အော်တို ယု တို့အိမ်၏ အိမ်ကြီးရှင် ဖြစ်တော့သည်။ ယု ကိုလဲ စာညံ့သည် ဆိုကာ ၈ တန်းကျောင်းသူ ဘဝနှင့် ကျောင်း ထုတ်ကာ..အထည်ချုပ်တွင် အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာက အခု အသက် ၂၅ ကျော်သည့် အထိပင်..။ဒေါ်လေး၏ သားနှင့် သမီးများကတော့ ကျောင်းနေရသည်။ အခုဆို ဒေါ်လေး၏ သမီးကြီးမှာ နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသူ…သားဖြစ်သူကတော့ ပထမနှစ် ကျောင်းသား…။ရသမျှ လုပ်ခ မှန်သမျှ အိမ်ရောက်ရင် အကုန်အပ်ရသည်။ အိုဗာတိုင်ကြေးတော့ သူတို့ မသိကြတော့ ယု အတွက် အသုံး နဲနဲ ထွက်တာပေါ့။ အထည်ချုပ်ဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း ယောင်္ကျားလေး ဆိုတာ လက်ချိုးရေ လို့ရတယ်လေ။ ရည်းစားဆိုလို့ ကိုလေးနဲ့ မှ ဦးဆုံး..။ကိုလေးကလဲ ဇွဲအတော်ကြီးသည်ဆိုရမည်…မှတ်မှတ်ရရ ယု အသက် ၂၂ ပြည့်သောမွေးနေ့ ဘုရားသွားရင်း တွေ့ပြီးကတည်းက ကိုလေး ယု နောက်မှ တကောက်ကောက်..လိုက်ပြီး ရည်းစားစကားပြောသည်။ ယု ကလဲ ခပ်တန်းတန်းပင်နေတော့ ကိုလေး သိပ်မကပ်ရဲ…။ သို့သော်..ကိုလေး မလာနိုင်သောရက်များတွင် ယု ကိုလေးကို မျှော်လင့်တာကို ယု ကိုယ် ယု သိနေသည်။ ဒီလိုနဲ့ ၄ နှစ်လောက်နေတော့ ကိုလေး စက်ဘီးနောက် ယု လိုက်စီးသော အဆင့် ရောက်ခဲ့သည်။ အခုတော့ ယု ကိုလေးကို ချစ်တယ် ဆိုသော အဖြေ ကို ပေးမိလေသည်။ရည်းစားမထားဖူးသော ယု တယောက် အဖြေ ပေးပြီးမှ ရှက်ပြီး မတွေ့တာ ၃ လတောင်ရှိပြီလေ…ဒီနေ့ မနက်တော့ အိမ်မှ ထွက်ကတည်းက ကိုလေးနှင့်တွေ့မည်ဟု ကြံရွယ်လာခဲ့သည်။ဖြစ်ချင်တော့ မနက်က ကိုလေးဖုန်းဆက်သည် လာကြိုမယ်တဲ့..
“အိုး..ညည်းလဲ သိနေတာပဲကောင်မရယ်…ယု ချစ်သူပေါ့…ယု တို့များ စက်ရုံထဲကကောင်လေးတွေ လိုက်တာတောင်မရဘူး ..ခုတော့ ရဲ ကိုကို နဲ့ မှ ပါသွားတော့တာပဲဟေ့”
“အိုး..ယောင်းမကလဲ ဟိုက သေနပ်ထောက်ပြီး ချစ်ခွင့်ပန်တာ နေမှာပေါ့…ကျိုက်ထီးရိုးက ဝါးသေနပ်တွေလိုပေါ့ မချစ်ရင် ပစ်လိုက်မယ် ဆိုပြီးလေ….ဟီး..ဟီး..ဟီး…ဟီး…”
ကိုလေးမှ ယု လက်ကို လှမ်းကိုင်လိုက်သည်။ စက်ဘီးမစီးပဲ ဘေးတွင် အတူတူ လမ်းလျှောက်ပြီး စကားပြောနေတုန်း ကိုလေး ရုတ်တရက် ယု လက်ကို လှမ်းကိုင်လိုက်သည်။ ဟင်…..ကိုလေး သူ့လက်တွေ အေးစက်နေပါလား…..လက် မာမာလေးတွေက ယု ဘဝအတွက်တော့ အားဖြစ်စေတယ် ကိုလေးရယ်…. ကိုလေးနဲ့ တွေ့မှ ယု ဘဝ မှာ ၁၃ နှစ်ကတည်းက ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အပြုံးတွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေ …..အို ……လူဆိုးကြီး
လွတ်ပါ..လို့ပြောနေပေမဲ့…ဒီရင်ထဲမှာပဲ တသက်လုံး နေချင်တာကို ကို မှ မသိတာ ကိုရယ်….အယ်တော့….ကို့ ရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ တဒုန်းဒုန်းနဲ့ ကြားနေရပါလား။ ကိုချွေးနံ သင်းသင်းလေးက ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး ရေမွှေးထက် ခုံမင်ဖို့ကောင်းနေပါလား….ချစ်လိုက်တာ ကိုရယ်…ကို ကိုဘာလို့ ယု ဒီလောက်ချစ်မိသွားလဲ မသိဘူး… “ကို..ကိုမှာ…အရင်က ရည်းစားတွေ တွေ့သွားရင် ယု ကို ရန်ရှာမှာ စိုးရတယ် ကိုလူလည်ရဲ့” “ယု ကလဲကွာ ကို မွေးကတည်းက ချစ်ခဲ့တာ..ချစ်တတ်ခဲ့တာ ယုနဲ့တွေ့မှ….”
“အော်..တကယ်ပြောတာ….ဒီမှာကြည့် ယု အတွက် လက်ဆောင်တောင် ပါသေးတယ်…” “ကို ကလဲ ဘာလို့လျှောက်ဝယ်တာလဲ…ယု က ဒါတွေကို မလိုချင်ဘူး…သစ္စာတရားပဲ လိုချင်တာ” “အော် ချစ်ကလဲ ဒီ လိုင်ဒါဗူးလေးပဲ ..သစ္စာတရားရဲ့သင်္ကေတ အဖြစ် သိမ်းထားလိုက်နော်…” “စကားတွေ ..သိပ်တတ်တာပဲနော်…..”
ချစ်သူ ၂ဦး ချစ်စကားချွေနေတာတောင် မဝသေး…..ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ အဆောက်အအုံ ပျက်ထဲ ပြေးဝင်သွားသော လူရိပ် ၂ ခု ကိုလေးတယောက်လှမ်းမြင်လိုက်သည်။ ထို အဆောက်အအုံ ကို ကြည့်လိုက်တော့ ဆောက်လက်စ အဆောက်အအုံ ပြစ်ထားတာကြာတော့ ရေညှိတွေတောင်တတ်လို့.. ဒီနေရာဟာ မကောင်းမှုတို့ ပျော်ပါးရာ သားကောင်တို့နေရာမှန်း ကိုလေး တန်းသိလိုက်သည်။
အိမ်ရောက်ရင် ဦးလေး နဲ့ ဒေါ်လေး ဘာပြသနာရှာမလဲ..စိုးရိမ်စိတ်တို့သည်…ချစ်သူနှင့် ပျော်ခဲ့ ရင်ခုန်ခဲ့သည့် ခံစားချက်များကို ဖုံးလွမ်းသွားပါရောလား….။ကို ကတော့ ဘေးမှ တတွတ်တွတ်နှင့် ပြောနေပေမဲ့ ယု တယောက် အင်း တခွန်းသာ လိုက်နိုင်တော့သည်။ ဘာလိုလိုနှင့် အိမ်နှင့် နီးလာသည်နှင့် ကိုလေးကို ယု ပြန်ခိုင်းလိုက်သည်။ ကိုလေးကတော့ ပျော်လို့ပေါ့…ယုမှာတော့ ငရဲခန်းထဲ ဝင်ရတော့မယ်…အကို….ဒါပေမဲ့ အကို ပျော်တာ မြင်ရင်ပဲ ယု ကျေနပ်ပါတယ် အကို…ရယ်..။ကိုယ် အဖြစ်အပျက်နှင့် ကိုယ် ဆိုတော့…ယု အိမ်ထဲကို ခေါင်းငုံကာ ဝင်လာ ခဲ့တော့သည်။ကံကောင်းချင်တော့ ဦးလေးက မရောက်သေး။ ခပ်သုတ်သုတ် မိမိအခန်းတွင်း ဝင်မှ ဟု စဉ်းစာပြီး ယု အိမ်အပေါ်ထပ်လှေကားသို့ ခပ်သုတ်သုတ်လေး လျှောက်ခဲ့တော့သည်။ တောတော်ကံကောင်းတာပဲ…ယု ရယ် ဟု ကိုယ်ဟာ့ကိုယ် တွေးနေတုန်း……..
“ညီမရယ်…ယု မိတ်ကပ်ဗူး..နုတ်ခမ်းနီ..ကအစ အင်္ကျီက အဆုံး …ညီမလေး သုံးချင်သလို သုံးနေတာပဲ… ဒီတခုတော့”
ယု ချစ်သူ ပေးထားတဲ့ ပထမ ဆုံး လက်ဆောင်..ယု တန်ဖိုးထားတာပေါ့….ဒါကို သူတို့မသိဘူး…အခုလဲ သူတို့လိုချင်တာ…ပဲသိတယ်လေ…ယု အဝတ်အစားဆိုလဲ…သူကြိုက်ရင် ယူဝတ် ပြီး မလျှော်ပဲ ဒီအတိုင်းထားသွား….မိတ်ကပ်ဗူး ..နုတ်ခမ်းနီတောင့် ဆိုလဲ…..ယု မသုံးလိုက်ရတဲ့ ပစ္စည်းတောင် ရှိသေး…အခုလဲ လိုင်ဒါ ဗူးလေး လုပြန်ပြီ….ဘယ်ပေးနိုင်မလဲ….ပြန်လုတာပေါ့…..။ဒါကိုကြည့်နေတဲ့ဒေါ်လေးက.. “ဟဲ့ ..သမီး…မားမား..ဒီထက်ကောင်းတာ ဝယ်ပေးမယ်…..ဒီဟာမ ဆီက အလကားအပင်ပန်းခံပြီး လုမနေနဲ့..” “ဟုတ်ပ..မားမားရယ်…အဖိုးမတန်တာကို…မပြောချင်ဘူး…”
သူ့အတွက်တော့ ဘယ်အဖိုးတန်ပါ့မလဲ..ယု အတွက်ကတော့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးလေ….ဘာပဲပြောပြော ဒေါ်လေးကိုတော့ ယု ကျေးဇူးတင်လိုက်သည်။ အိပ်ခန်းထဲရောက်မှ…လိုင်ဒါဗူးလေးဖွင့် ခုနက ကိုလေးနဲ့ ပြောတာလေးတွေကို ပြန်ပြီ..စဉ်းစား..ရင်ခုန်ရမယ် မဟုတ်ပါလား။……အိုး…..လူညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ကြီးနဲ့ စိတ်ကူး နုနုလေးတွေ မတွေးချင်ဘူး……ရေချိုးအုံးမှပါ….ဟု တွေးပြီး ရေချိုးခန်းထဲ…ဝင်ခဲ့တော့သည်။ ** *** ** **** **** *** *** ** **** ** ** ** ** **** * **** * *** ** * ** *** * ** “ကျော်လေးကျော်…ထဲမှ ကိုကြီးကျော်….အဘမြင်းဖြူရှင်…..၃၇ မင်း နတ် အပေါင်းအား..ပူဇော်ပသ ပါသည်………” ယုတယောက် ထို အသံကြားသည်နှင့် မိုးကျိုးပစ်သလို..ခံစားရသည်….ခုမှ အဝတ်အစားချွတ်ပြီး ထမိန်ရင်ရှားနှင့် ရေချိုးခန်း ဝင်မယ် လုပ်တုန်းရှိသေး…ဦးလေးဖြစ်သူ ပြန်လာသည့်အသံ….ဦးလေးဖြစ်သူက စရိုက်တမျိုး… အိမ်ရောက်တာနဲ့ ဘုရား မရှစ်ခိုး နတ်ရှစ်ခိုးသည်။ရှစ်ခိုးပြီးရင် ဒေါ်လေးနှင့် အတူ ချစ်ရည်လူးကြတော့မည်….ယု မတွေ့ရသော်လဲ အသံတော့ ကြားနေရသည်။အဲ အသံများကို ယု အရွံ့ဆုံး ..အခုလဲ နတ်ရှစ်ခိုးပြီး အပေါ်သို့ တတ်လာသော အသံကြားရသည်…ယု အသာလေး နားစိုက်ထောင်နေသည်..အခန်းတံခါး ပိတ်သံကြားရသည်…ဒါ အခွင့်ကောင်းပဲဟု တွေးကာ..ယု ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ခဲ့တော့သည်။
ဒေါ်အေးပုံ ၏ အဝတ်များကို ဦးတုတ်ချို က အကြမ်းပတမ်းပင် ဆွဲချွတ်လိုက်သည်….ဦးတုတ်ချို စိတ်ထဲမှာတော့… ခုနက ပျော်ပါးမယ်ဆိုပြီး ခေါ်ထားသော…အပျက်မ ချောချော တောင့်တောင့် မျက်နှာကိုမြင်လာသည်….ခုနက အားမရခဲ့ တန်းလန်းကြီးဖြစ်ခဲ့သမျှ ဒေါ်အေးပုံ ထံ ပုံချတော့သည်။ ဒေါ်အေးပုံက ရုန်းပြီး…လက်မခံနိုင်ပဲ ..ရုန်းရင်း
“အတင်းလုပ်တော့တာပဲတော်…နာသွားသေးလား…ဒီမှာ အဆင်သင့်တောင် မဖြစ်သေးဘူး” “နာတော့ မနာပါဘူး ဒါပေမဲ့ ရူးပေါက်ချင်တယ်ဟ…ရူးသွားပေါက်လိုက်ဦးမယ်”
ဦးတုတ်ချိုတယောက်…ရေချိုးခန်းသို့ လာခဲ့တော့သည်။ရေချိုးခန်းတွင် အိမ်သာ ပါ တွဲဆောက်ထားတာက ယုအတွက် ကံဆိုးတာလား ကံတရားကပဲ မျက်နှာသာ မပေးတာလား ………။ရေချိုးခန်း တံခါးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်..သို့သော် မပွင့် အထဲတွင်ရေချိုးသံတို့သာကြားနေရသည်။ ယု အခန်းတံခါးလဲ ဟနေသည်။ သေချာပြီ…ဒါ ..ယု ရေချိုးနေတာပဲ…ဟု ဦးတုတ်ချို သိလိုက်သည်။ ဦးတုတ်ချိုမှာ ယခင် ကတည်းက ကြံစည်ထားသည့် အတိုင်း ရေချိုးခန်းထဲ မြင်နိုင်ရန် အပေါက်ဖောက်ထားတာ ဘယ်သူမှ မသိ။ ရည်ရွယ်ချက်က ဒေါ်အေးပုံ ရေချိုးစဉ်ချောင်းရန်နှင့် တခါတလေ ဒေါ်အေးပုံ တို့ဘက်မှ ညီမများ အမျိုးများလာလျှင် ချောင်းရန်ပင် ဖြစ်သည်။ အခုတော့ မထင်မှတ်သော ဂွင်က ဝင်လာလေသည်။ယခင်ကတော့ ကိုယ် သမီးနှင့် မတိမ်းမယိမ်း..ကလေးသာသာ လိုပင် ထင်ခဲ့သည်။ သို့သော် အခုဆို ယု တယောက် ရည်းစားထားတတ်နေပြီ။ အပျိုတယောက်ရေချိုးတာကို ချောင်းရတဲ့ အရသာက ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်မှန်း ဦးတုတ်ချို သိသည်..။ အပေါက်တွေ့သည်နှင့် ချောင်းလိုက်သည်။ အထဲမှာတော့….ယု တယောက် ရေကို စိမ်ပြေနပြေ ချိုးနေသည်။ ဆံပင်ရှည်ရှည်…နို့တင်းတင်းလေးနှင့် အိုးကားကား တို့ အပေါ် ရေတို့ တလက်ဆက် ကျဆင်းနေသည်။ အဖုတ်မွေးရေးရေးတို့က အဖုတ်ကွဲကြောင်းလေးကို ကာကွယ်ရန် မစွမ်းသာတော့……အသားဖြူသူ..တရုတ်ဆက်သူ ပီပီ နို့သီးခေါင်းလေးက ပန်းရောင်လေးသန်းနေသည်။ ယု တယောက် ဆပ်ပြာကိုင်ပြီး တကိုယ်လုံးကို ဆပ်ပြာနှင့် ပွတ်တိုက်လိုက်သည်။ ပေါင်လေးကားပြီး အဖုတ်နှင့် ဖင်နေရာတို့ကို ဆပ်ပြာတိုက်လိုက်ရာ….အဖုတ် အတွင်းသား ရဲရဲလေး တစွန်းတစ ပေါ်လာလေသည်။ ဂျိုးကြားရှိ ဂျိုးမွေးများ ယု တယောက် တွေ့ပြီဆိုရင်ပဲ…တခုခု ကိုရှာနေသည်။ ထို့နောက် ဂျုတ် တခု လက်ထဲပါလာပြီး ဆပ်ပြာလေး ပွတ်ပြီး ဂျိုးကြားရှိ အမွေးများ စပြီး ရိတ်သည်။ ရေထိထာဒသော ဂျုတ်တို့သည်..အမွေး မပျက်နိုင်သဖြင့် တပတ်လေး ရင်ရှားကာ… တံခါးဖွင့်လိုက်သည်။ဦးတုတ်ချို တယောက် ချောင်းကောင်းကောင်းနှင့် ချောင်းနေရာ နောက်ဆုတ်ရန် အချိန် နောက်ကျပြီး…ရေချိုခန်းထဲ အရှိန်လွန်ကာ ပြုတ်ကျလေတော့သည်။
“ကောင်မ …ဒါ ပါးပါးကို လုပ်ကြံတာ….ဆွဲလုပ်လိုက်ရ ..သေတော့မယ်…ကောင်မ စောက်ချိုးကို မပြေဘူး” “တော်တော်မွှေတာပဲ….ဂျီးတော်ရယ်…ကိုယ်ဟာ့ကို အေးဆေးမနေဘူး…ကျွေးလိုက်အုံးမယ်” “စနေဂျိုမ……မြွေပွေးမ…ငါလုပ်လိုက်ရ သေတော့မှာပဲ”
ဝေသနာ ကို ခံစားရင်း…..ဝမ်းနည်းခြင်း အပြည့်နှင့် မျက်ရည်တို့ မျက်ဝန်းမှ တသွင်သွင်စီးကျလို့နေသော…… အခန်းထောင့် တနေရာ ကပ်ရင်း ကျုံကျုံလေး ရိုက်သံတို့နှင့် ထိုင်နေရှာသော သနားစရာ….ယု ..ဆိုသော မိန်းခလေး….
** **** *** *** ***** *** **** **** * **** **** ** **** **** * ကျွနုပ် တစ်ရူးလိပ်မှ တစ်ရူး အချို့..ယူပြီး ယု အား ကမ်းပေးလိုက်သည်။ မယူပဲ မျက်ရည်တို့သာ တသွင်သွင်ကျနေသည်။ ကျွနုပ်သည်ကား အရှက်တော့ ကွဲမခံ ဘေးမှ ထိုင်နေသော ဒေဝီအား ကမ်းလိုက်သည်။ ဒေဝီမှာလဲ မျက်ရည် တွေရော နှာရည် အပြင် မျက်ချီးများပါ လက်၂ ဘက်ဖြင့် အားပါးတရ သုတ်နေသည်။ ကျွနုပ်ကမ်းပးသော တစ်ရူး ကိုယူပြီး နှပ်ချီးများကို တဖြီးဖြီး မြည်အောင် ညှစ်ထုတ်နေသည်။ ကျွနုပ်လဲ ဒေဝီ အဖြစ်ကို တွေ့ပြီး တောင်နေသော လီးမှာ ပဲမြစ်ခန့် တိုဝင်သွားတော့သည်။
“ဟုတ်…ဆက်ပြောပြ ပါ့မယ် ဆရာ…..အဖြစ်က ဒီလိုပါ”
ဦးတုတ်ချို အိမ်မှာ မိန်းမ မရှိခိုက်…ကြက်မတယောက်ကိုခေါ်ပြီး အိပ်ခန်းထဲ ထည့်ထားပြီး ပျော်ပါးနေသည်။အသက် ၂၀ ဝန်းကျင် ကောင်မလေးနှင့် ကုတင်ထက်တွင် ပလူးချင်တိုင်း ပလူးနေသည်။ ဦးတုတ်ချိုသည် ထိုကောင်မလေးကို လိုးခန်းဖွင့်ရန်…ကျားကွတ် ကစားမည်ဟု အစချီ ကြံစည်သည်။ ပိုက်ဆံပေး အပျော်မ တယောက် အနေဖြင့် အိပ်ခန်းထဲခေါ်ပြီး စကပ်လှန်ကာ တန်းလိုး လို့ရသော်လဲ..ဦးတုတ်ချိုက လိင်ကိစ္စထူးထူးခြားခြား ဝါသနာက တမျိုး…နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပျော်ပါးချင်သည်။ မိန်းမ နှင့် မရသော နည်းများ တခါတလေ အိမ်က မိန်းမကို လိုးရတာ ညီးငွေ့လာသည့်အတွက်လဲ ပါသည်။ ကျားကစားနည်းမှာ အကွတ်ရွှေ့ပြီး ပထမဆုံး အစားခံရလျှင် အဝတ်အစား တခုချင်း ချွတ်ရသည်။အဝတ် တွေကုန်သွားလျှင်…ဆော့ပင် တချောင်းနှင့် ရှုံးသူ၏ ကိုယ်ခန္ဒာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နေရာကို ကြိုက်သလို ဆွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျားတပွဲပြီး တပွဲ ကစားလာရာ ဦးတုတ်ချိုရော အပျော်မလေး ခန္ဒာကိုယ်မှာပါ မှင်များပွကုန်တော့သည်။ထိုအခါ အင်္ကျီညှပ်ကလစ်များ ကို အသုံးပြုပြီး ခန္ဒာကိုယ်၏ ကြိုက်ရာနေရာကို ညှပ်ခြင်း ကစားနည်းကို ပြောင်းလေသည်။ ဦးတုတ်ချိုမှာ အရက် ကလေးသောက်လိုက် ကျားကွက်လေးရွှေ့လိုက် ၊ ညှပ်ကလေး ကို နို့လေးညှပ်လိုက်..နှခေါင်းလေးညှပ်လိုက်နှင့် အတော်ဟုတ်နေသည်။ ဦးတုတ်ချို မှာလဲ လီးရော နားရွက်ရော…နောက်ဆုံး ဆံပင်မှာပါ အတော် ညှပ်မိနေပြီ. အပျော်မလေးမှ
အပျော်မလေးသည် အိပ်ခန်းတံခါးကို အတင်းဖွင့်ထွက်မည်အလုပ် နောက်မှ ဦးချိုကြီးမှ သိုင်းဖတ်ပြီး ချုပ်… အပျော်မလေးက အတင်းရုန်းပြီးဖွင့်…..တံခါးကပွင့်ပြီး ၂ ယောက်လုံး လုံးပြီး ထွက်လာသည်။ “အို……”
“ကို့ လက်ဆောင်ကို အိမ်ရောက်မှ ဖွင့်ကြည့်နော်….နောက်ပြီး ဒီနေ့ အတွက် ကို့ အချစ်နဲနဲ ထပ်ပေးမယ်နော်” “ဟင်….ဘာလဲ အရင်ကတည်းက အချစ်က နဲနဲလျှော့နေတယ်ပေါ့”
“ဟား လျှော့နေတာမဟုတ်ရပါဘူး…ပိုပြီး နဲနဲ လျှံကျလာလို့ ထပ်ပေးတာ”
ထိနေပါရောလား….မလုပ်ပါနဲ့တော့ သူရယ်..ဒီမှာ မောလှပြီ…..ရင်ထဲက ပြောလိုက်တဲ့ စကားကို သူပဲမကြားတာလား..မကြားချင်ယောင်ပဲဆောင်နေတာလား မသိဘူး….မသိသလို ကို က ယု အောက်နုတ်ခမ်းလေးကို စုတ်သပ်နေလေရဲ့…..မငြင်းရက်ပါဘူး ကိုရယ်…ကို့ အနမ်း နွေးနွေးလေးတွေက နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းနေတာကိုး….ဟောကြည့် ..ယုလဲ မကောင်းဘူး ယု ကိုယ်ယု တောင် မထိန်းနိုင်တော့ဘူး.. ကို့ နုတ်ခမ်းလေးကို ပြန် ပြီးစုတ်သတ်မိနေပါရောလား….ရင်တွေကလဲ တုန်လိုက်တာ….ရင်တွေပါမကဘူး တကိုယ်လုံး တသိမ့်သိမ့်နဲ့ တုန်နေပါရောလား………………အိုး ငါကလဲ ဘာတွေစဉ်းစားမိနေမှန်းမသိပါဘူး..ဟု ယုတယောက် သူ့ဟာသူတွေးရင်း ရှက်ပြုံးလေးပြုံးမိတော့သည်။ လက်ဆောင်ထုတ်လေး ပိုက်ပြီး မိမိကုတင်ပေါ်ထိုင်ကာ ပါကင်ထုတ်လေး ဖောက်လိုက်သည်။ …ဟယ်..လှလိုက်တဲ့ ဂါဝန်လေးပါလား….ဝတ်ကြည်အုံးမှ ဟုတွေးရင်း စွတ်ကြည့်လိုက်သည်။ နဲနဲကြပ်သလိုလိုပဲ….အောက်က ဘော်လီလေး ချွတ်ပြီး ဝတ်ကြည့်မှ….ဟင်….အောက်ကလဲ စိုစိစိုစိ ဖြစ်နေပါလားဟုတွေးရင်း ဘောင်းဘီချွတ်ကြည့်တော့..အောက်ခံဘောင်းဘီလေးတွင် ခပ်ချွဲချွဲလေး ဖြစ်နေသော အရေ တကွတ်…..ဗူးထဲမှာ စာလေး တစောင်တောင်ပါသေးတယ်…
ပက်လက်လှန်ထားသော အပျော်မလေး၏ စောက်ဖုတ်ကို ဦးတုတ်ချိုက ခြေမ ဖြင့် ကလိနေသည်။ကလိလိုက် ဘေးမှာ ချထားသော အရက်ပုလင်းလေးသောက်လိုက်နှင့် အတော်ကြာတော့ အပျော်မလေးကို သူ၏ ခန္ဒာကိုယ် အနှံ ပါးစပ်နှင့် စုတ်သပ် ခိုင်းလေသည်။ ဆံပင်မှ စပြီး စုတ်ခိုင်းလေသည်။ အပျော်မလေးမှာ မလုပ်ချင်သော်လဲ ပိုက်ဆံယူပြီးသောကြောင့် ဒီတည ဝဉ်ခံရပေမည် မဟုတ်ပါလား။ တဖြည်းဖြည်း ဆံပင် နဖူး..မျက်လုံး…ပါး…ပါးစပ်… နာရွက်..လည်ပင်း…တဖြည်းဖြည်း ဆင်းလာပြီး…လီးကို စုတ်လေသည်။
အပျော်မလေးမှာ…..လီးကို ပါးစပ်နှင့် ပြန်စုတ်ပေးနေသည်။ တချောင်းလုံးကို လက် ၂ဘက်ဖြင့် အားရပါးရကိုင်ပြီး မဆံမပြဲ ပါးစပ်ဖြင့် ငုံရင်း လျှာထိပ်လေးဖြင့် လီးထိပ်ရှိ အပေါက်လေးကို ကလီနေသည်။ ဘာမပြောညာမပြောနှင့် ဦးတုတ်ချိုတယောက် ဖလင်ကင်မရာကြီးကိုင်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်မည် အပြု…
“ဒီမှာ ဦးလေး ရှင်ကျေနပ်အောင်လဲ ကျမ အောင့်အီးသည်းခံပြီးလုပ်ပေးတယ်..ဓါတ်ပုံတော့ မရိုက်နဲ့လေ.” “ဟ…ရင့်လှချည်လား ဓါတ်ပုံလေးရိုက်တာဘာ ဖြစ်လဲ ..ကဲဟာ…..ရိုက်တယ်…ဟားးးးးး.” “မယုတ်မာနဲ့နော်….ရှင်ပိုက်ဆံပေးတိုင်း လုပ်ချင်တာ လုပ်ရမယ်ထင်လား…”
“လုပ်တယ်…ဘာဖြစ်လဲ…အင်တာနက်ပေါ်တင်ရင် ..မင်းအတွက်တောင်…စီးပွားရေးတွက်ချေ ကိုက်သေး” “ဘာပြောတယ်ရှင့်..ရှင်မိုက်ရိုင်းလှချည်လား….တခြားလူပဲရမယ် …ကျမတော့ မရဘူး…..ရိုက်ချင်သပ ဆို … စောစောက ရှင့်သမီးကို ရှင့်ဟာရှင်ရိုက်ပြီး ရောင်းစား..ကျမကတော့..သွားတော့မယ်…နောက်လဲ မခေါ်နဲ့တော့..” ဦးတုတ်ချို မျက်နှာ ဝင်းခနဲဖြစ်သွားသည်။ ..ယု ..တယောက် အရွယ်ရောက်နေပြီ ဆိုတာ..သူသိသည်။ အရက်ကလေးကလဲ မူးနေတော့ ရဲတာပေါ့…ဟား…..ဟုတ်ပ …ဒီဂျိူမ ကို ဒီနေ့ည
အပြတ်လိုးပြစ်ရမယ်…..ဘာပဲပြောပြော ဒီ အပျက်မလေးကို ကျေးဇူးတင်ရမလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ။….ဟားးးး… ဦးတုတ်ချို တယောက် အရက်ပုလင်းနှင့် ကင်မရာ ကိုင်ပြီး ယု အခန်းထဲသို့ ဒယိုင်းဒယိုင် လျှောက်ခဲ့တော့သည်။ ကံများကောင်းချင်တော့ ယု အခန်းက လော့ချမထားပေ။ယခင်ကဆို …ယု အခန်းလော့ချထားတာ… သူရေချိုးနေချိန်တောင် အခန်းထဲ ဝင်မရ..အခုတော့ မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲကိန်းစိုက်လေသည်။ဟားးးးး……… ဟားးးးး…………..ဝုန်း ဆိုသည့် အသံနှင့် အတူ ယု တွေ့လိုက်ရတာက နံငယ်ပိုင်းလေး ခါးမှာစီးထားသော ဦးလေး….အရက်ပုလင်း နှင့် ကင်မရာ တလုံး..
“သမီးကို ဆက်ဆီ Post လှလှလေးရိုက်ပေးမလို့လေ…….ဟား….ဟား…ဟား…..”
တံခါးလော့ချဖို့ မေ့ခဲ့တာ ယု အတွက် ပထမဆုံး အကြိမ်….တခါတည်းကလဲ..အဲလောက်တောင် ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလား…..အို…လူယုတ်မာကြီး တပတ်ပိုင်းလေးကို ချွတ်လိုက်ပြီ…မျက်စိ ၂ ဘက် လက်နှင့် အုပ်လိုက်သည်…မျက်ရည်တို့က ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာတော့သည်….ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး လူယုတ်မာကြီးက အရက်မော့သောက်ပြီး ကင်မရာကို ခုံပေါ်တင် ….ယုဆီလာ လက်၂ ဘက်ကို သူ့လက်ကြီးနှင့်
ယု မှားပြီ…..စောစောကမှ ကြည်နူးစရာလေးတွေ တွေးပြီး ဘောင်းဘီ ချွှတ်မိသွားတာ…..ခေါင်းတွေ တဖြည်းဖြည်း မူးနောက်လာသည်…..ရုန်းရအော်ရငိုရတာ အားအင်တွေလဲ ကုန်ခမ်းနေပြီ……ယု သိလိုက်တာက .. လူယုတ်မာကြီး ယု ပေါင်ကြားထဲရောက်နေပြီ….နံပါတ်ဒုတ်လို မာမာ ကြီးက ယု စောက်ပက်လေးကို တချက်ချက်ထိမိနေပြီ……ဟို လူယုတ်မာကြီးကလဲ…ယု ပေါင်ကို အရင်းဆွဲဖြဲနေပြီ….အချုပ်ခံထားရသော လက်၂ ဘက်လဲ နာကျင်လှပြီ…… လူယုတ်မာကြီးက ဂါဝန်လေးကို ချွတ်ဖို့ကျိုးစားနေသည်…မရ… .စိတ်မရှည်တော့ပဲ……
ဆွဲဖြဲလိုက်သည်…..အကာအကွယ် မရှိသော ရင်အုံသည်..အေးခနဲဖြစ်သွားသည်..ယု ကြောက်အားလန့်အားနှင့် ရုန်းလိုက်ရာ…လက်၂ ဘက် လွတ်သွားသည်။ လက် ၂ ဘက်လွတ်သွားသည်နှင့် နို့ပေါ်သို့… ယှက်ပြီးကာလိုက်သည်…ကာလိုက်ချိန်တွင် စောက်ပတ်လေးကို စို့နှင့်
ရိုက်သွင်းလိုက်သလို….ဝေသနာစူးစူး…..သေမတတ်ခံစားလိုက်ရသည်။ အဆီတဝင်းဝင်းမျက်နှာကြီးက ယု ပါးပြင်ကို ကပ်နမ်းသွားသည်။အရက်နံ ခပ်စူးစူး နုတ်ခမ်းမွေး…ခပ်ကြမ်းကြမ်းတို့၏
စူးရှရှထိုးစိတ်မှု…….သံရိုက်ထည့်သလို ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ချက်….လက်ကြမ်းကြမ်းနှင့် ထိတွေ့နေသော ရင်သားနုနု….အားကိုးရာမဲ့ မိန်းမပျိုတယောက်၏ အားကိုးရာက မျက်ရည်…..အပြင်မှာ မိုးကလဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်ရမ်းရမ်း……
ယု..တယောက် ရှိုက်ငိုရသည်မှာလဲ မောလှပြီ…..တကိုယ်လုံးလဲ နာကျင်နေသည်။စောင်လေးခြုံရင်း…ဒူး ၂ ဘက် လက်နှင့်ပိုက်ကာထားသော်လဲ…ယု ကိုယ် ယု အလုံခြုံသလို ခံစားနေရသည်။ရုတ်တရတ် ဆိုသလို… အခန်းတံခါးပွင့်သွားသည်….ယု ကြောက်လန့်တကြားကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်လေး………ဒေါ်လေးမှ အထိပ်တလန့် အလိုမကျသော မျက်နှာနှင့်……
“ဟဲ့ …ကောင်မ …ဘာဖြစ်ပြန်တာလဲ…..တရှုံ့ရှုံ့နဲ့…ကျက်သရေကို မရှိဘူး..အရက်တနံ့ကလဲ ထောင်းနေတာပဲ..” “ဦးလေး…..သူ…..သူ……အကျင့်မကောင်းဘူး…..”
ယု ဆက် မကြားချင်တော့..ဒီအခြေအနေဆို ဒီအိမ်မှာ ယု ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့လူ မရှိတော့….ယု အပေါ်အင်္ကျီလေး ကောက်ဝတ်ကာ…မိုးသဲထဲ ထွက်ခဲ့တော့သည်….။ယု ဘယ်သွားရမလဲ….ယု အခု ဘာလုပ်ရမလဲ……ဘာကိုအားကိုးရမလဲ….မိုးကလဲ…ဘာကငြိုးများရှိလို့ရွာနေရတာလဲ…..မုန်းဖို့ကောင်းတာက ဘယ်သူလဲ…စောစောစီးစီး သေသွားတဲ့ မိဘ ၂ ပါးကိုလား….ယု ကံတရားကိုလား…..လောကကြီးကိုလား…… ယု တယောက် ခြေဦးတည့်ရာ..လျှောက်လာခဲ့သည်မှာ ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်နေမှန်းမသိ…ညအမှောင်မှာ… ညငှက်မတို့ ပျော်ပါးရာအချိန်….ယစ်မျိုးနွယ်တို့…ပျော်မြူးရာ အချိန်…. ယု သွားနေတုန်းကို ကားတစီးပေါ်မှ လှမ်းအော်သွားသေးသည်…..လိုက်မလား..၁သိန်း ပေးမယ်..တဲ့…..ယောင်္ကျားတွေများ ဒီကိစ္စဆို ဘာမှမမြင်တော့ဟု စိတ်ထဲက ဒေါသထွက်နေပေမဲ့ တကယ်ထွက်လာတာက မျက်ရည်တွေလေ…..မိုးရေတွေနဲ့ ရောပြီး မျက်ရည်မှန်းတောင် မသိနိုင်တော့ပြီ…
မထင်မှတ်ပဲ ကိုလေးနဲ့ တွေ့လိုက်ရတာ…..ဘာပဲပြောပြော အားကိုးစရာရနေတော့သည်။ ယု တယောက် မိုးရွာထဲ…ကိုလေးကို ဖတ်ပြီး ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချလိုက်တော့သည်….။
ယု ကျွနုပ်ရှေ့တွင် ပျို့အန်လေတော့သည်။……ညှက်ချာဖျား…..ကျွနုပ်တောင်…ဖီးတတ်..လီးတောင်ပြီး စိတ်ကြွသေးသည်ပဲ……ယုလို ခံစားလွယ်သော မိန်းခလေးတယောက် အဖို့…..အဘယ်သို့ရှိအံ့နည်း။ ယုသည် အန်နေရာမှ ခုံအောက်သို့ လဲကျကာ..သတိမေ့မျောသွားသည်။ကျွနုပ်လဲ ခေါင်းနပန်းကြီးပြီး…တွဲဘက် ဒေဝီထံ ကြည့်လိုက်ရာ…..ဒေဝီမှာလဲ …..အန်ထားသည်မှာ..အမှိုက်ပုံနှင့် ပြည့်လုပြီဖြစ်လေသည်။ “ဟေ့ကောင်တွေ…..လာကြဦးဟ……ဒီမှာမေ့ကုန်ပြီ…”
ပြာယာပြာယာနှင့် ရောက်လာသော ရဲဘော် သဝေထိုးမှမေးလေသည်။ တခုခု ခိုင်းလိုက်လျှင် သဝေထိုးပြီး ကြာတတ်သောကြောင့် မူရင်းအမည်ပျောက်ကာ….သဝေထိုး…ဟု တွင်လေတော့သည်။လူကလဲ ရဲသာဖြစ်လာတာ ဗေလုဝ ထက်ပင် ပိန်ပြီးသေးနေသေးသည်။
“ဟေ့ကောင်…သဝေထိုး …ပုလွေရိုး….မအေ…..ငါနော်…ပြောလိုက်ရမကောင်းရှိမယ်..ကုန်အော်ကိုခေါ်လိုက်..” “ဆရာ…ဘာမှ ထပ်မလုပ်နဲ့နော်…”
လူပျိုကွ….ငါပြောလိုက်ရမကောင်းတော့ဘူးနော်…..သဝေထိုး..ပုလွေရိုး…မအေ….သွားခေါ်..ခု..” ရဲတပ်ဖွဲ့မှ…တပ် တစိတ် ခေါ်ပြီး ဆေးရုံသို့လာလေသည်။ဆေးရုံရောက်သည်
ဆိုရင်ပဲ..ဒေဝီကတော့..အချိုရေလေးသောက်ကာ သက်သာသော်လဲ..ယု မှာ…..ဒေဝီနှင့် အတူ…စမ်းသပ်ခန်းထဲ လိုက်သွားလေသည်။…ကျွနုပ်..ကိုလေးနှင့်..တပ်စုတစိတ် ကတော့ အပြင်မှာပဲကျန်ခဲ့တော့သည်။ “ဆရာ….ကျနော်..ကို တခုလောက်ကူညီပါလား”
“ဒီလိုပါ ဆရာ….ဒီကိစ္စက ထောင်ကျမဲ့ အမှုဆိုတာ ကျတော်သိပါတယ်…အဲတော့…တရားခံက ကျနော်ဆိုပြီး…” “တော်တော့ ကိုလေး….မင်းက အမှုထမ်းကောင်းပါကွာ….မင်းချစ်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်….ဒါပေမဲ့….” “ကျနော်ဒူးထောက်တောင်းပန် ပါတယ် ဆရာရယ်”
ကျွနုပ် တောင်ပန်ရတာပေါ့…မတောင်းပန်လို့လဲမရ….ကျွနုပ်လိုက်သော အမှုသည် အမှုကြီး..ပြီးတော့ တရားခံကလဲ ဝန်ခံနေတော့…..
ဒေဝီအော်သံစူးစူးရှရှကြားလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်..စမ်းသပ်ခန်းသို့ ကိုလေးနှင့် ကျွနုပ် ပြေးဝင်လိုက်သည်။..ယုက သူဗိုက်သူ…ထုရိုက်နေသည်…..
“ရိုက်ပါ ကိုရယ်…..ရိုက်လိုက်ပါ….အသေသာ သတ်လိုက်ပါတော့…..”
“မဟုတ်တာ..အချစ်ရယ်…..ကို မရိုက်ရက်ပါဘူး….ယု နာသွားသေးလား….”
ကျွနုပ်.လက်ကိုင်ပုဝါထုတ်ကာ ဒေဝီကို လှမ်းပေးလိုက်သည်။ ဒေဝီက မယူ….အရှက်ပြေ..ကမ်းသောလက်ကို ဆန့်ထုတ်ပြီး….ခပ်တည်တည်နှင့် ပြောင်နေသောနှဖူး….နီနေသော နှာခေါင်းတို့ကို သုတ်လိုက်သည်။ ယု က ကျွနုပ်ကို ကြည့်ပြီး..သူမ၏ အကြောင်းကို ဆက်ပြောရန် ဟန်ပြင်လေသည်။ဒေဝီက ဘောပင်နှင့်စာအုပ် အဆင်သင့် လုပ်နေသည်။ အမုန်းမျက်နှာ….အငိုမျက်လုံး….လွတ်မထွက်အောင် ဆုတ်ကိုက်ထားသော လက်တဘက်……….ယုယစွာထွေးပွေ့ထားသော…ကိုလေးလက်တစုံ…..ယု ရင်ထဲမှာတော့ မီးတောင်တခု….ပေါက်ကွဲမယ့်ပုံ………………………..
အမှောင်၏ အနက်ရှိုင်းဆုံး (သို့) အမှောင်ကမ္ဘာထဲမှသနားစရာမိန်းခလေး(သို့) ယု ၏ အကြမ်းဆုံးဘဝမှတ်တိုင်
ဒီနေ့ ယု မွေးနေ့ သို့သော်…ယု မပျော်နိုင်…..ယု အတွက်..မည်သို့မည်ဖုံ အိမ်ပြန်ရမည်နည်း။ ကိုလေးအိမ်ပဲ နေရမလား…..ယု စိတ်တွေ ရှုပ်ထွေးနေသည်…ဒီနေ့ အဝတ်တထည်ကို ချုပ်နေတာ..မှားလိုက် ပြန်ပြင်လိုက်နှင့်.. ဒီနေ့ လစ်မစ်အဖြစ်….အထည် ၂၀ မှာ ၁ဝထည်ပင်မပြီးနိုင်….နာရီကြည့်တော့ ၄ နာရီ ကျော်ကျော် …အိမ်ပြန်ချိန်က နီးလာသည်နှင့် အမျှ ….စိတ်ရော လူပါ…ဂဏာမငြိမ်…အလုပ်ကမပြီး… …ရုတ်တရက် ဆိုသလို ယု နာရီဆီ မျက်လုံးရောက်သွားပြန်သည်။…ဟင်….နာရီအောက်မှာ …ဟို လူယုတ်မာကြီး….ယု ခေါင်းကို ငုတ်ချလိုက်သည်..မဖြစ်နိုင်ဘူးဟု ပြန်တွေးပြီး..ပြန်ကြည့်လိုက်သည်။
“ပြောလိုက်ရင်ဒီလိုချည်းပဲ ကောင်မတွေ နံ့ကို နံ့တယ်..@#$%^^&((&^%%@#$#$%^” သူပြောချင်တာပြောပြီး…ကြီးကြပ်ရေးမှုးထွက်သွားလေသည်။စာအိတ်လေးကြည့်တော့ ပို့သူအမည်မပါ…ယုယု အတွက် ဆိုသော..စာသား သာပါလေသည်။ယု..စိတ်ဝင်တစား..စာအိတ်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။……ဟင်…… ဒါ…..ဒါ…..မနေ့ညက ပုံတွေပါလား……။အဝတ်အစားမလုံတလုံ နှင့် ငိုနေသောပုံများ… .လူယုတ်မာကြီး ယုတ်မာစဉ်က ရိုက်ထားသော ပုံများပင်….။ယု တယောက်..ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့…လူယုတ် မာဦးလေး …လက်ခလယ်လေး လှုပ်ပြီး ခေါ်နေသည်… တနေရာကနေပြီး…။ယု
“တူမ လိမ္မာလေးကလဲ…တူမပြန်လာတဲ့ထိ…ဦးလေးမစောင့်နိုင်လို့ လိုက်လာတာ…လာပါကွာ..လိုးရအောင်…” လိုးရအောင်ဆိုသောစကားသည်..ယုနားထဲ သံရည်ပူလောင်းချလိုက်သလိုပင်…လူယုတ်မာ ဦးလေးမှာ အလုပ်ထဲပင် မရှောင်တော့ပဲ…လုပ်မယ်ဆိုပြီး…ယု ပုခုံးကို လာကိုင်လေသည်။ယု က ရုန်းပြီး “အော်..လိုက်မယ်နော်….ဒါ ရှင့်အိမ်မဟုတ်ဘူး..အလုပ်…နောက်ပြီး ကျမက ရှင့်မယားလဲ မဟုတ်ဘူး..လွတ်..” “ဟား…အော်လေ..မယားလေးရဲ့ မင်းသိက္ခာ..ကိုမထောက်ရင် အော်ပေါ့…..အော်တာတို့. .ရုန်းတာလို့.. လုပ်လို့ကတော့..နင့်သူဌေးဆီ..ဒီပုံတွေ ရောက်ပြီသာမှတ်လိုက်…ဟားး….လိမ္မာပါတယ် မယားငယ်လေးရယ်..ဟဲ… ဟဲ… ”
ယု ဘာမှမပြောသာတော့….သူပြုသမျှ..ခနတော့ အောင့်အီးသည်းခံပြီးနေရတော့မည်..မဟုတ်ပါလား… နုတ်ခမ်း လေးကို ပေါက်ထွက်မတတ်ကိုက်ရင်း….အံကြိတ်ကာ…မျက်နှာတဖက်လှည့်…..နေလိုက်တော့သည်။ ဦးတုတ်ချိုကတော့ မှိုရသော မျက်နှာမျိုးဖြင့်…ယု ရင်ဘက်ကို လက်၂ ဖက်နှင့် ဂျုံနယ်သလို အားပါးတရ… ကိုင်နေလေတော့သည်။..အားရပြီဆိုမှ….အောက်ရှိ စကပ်ကိုလှမ်ပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီလေးကို နှိုက်လိုက်ရာ…………….
“နင့်မွေးနေ့မှန်းသိလို့လားဟ….အေးဟာ…နင်တို့ဦးလေးက တော်တော်ဂရုစိုက်တာပဲ….ဒါနဲ့ နင့်ကို ကြီးကြပ်ရေးမှုးက နေရာ မှာမတွေ့လို့ပြောနေတယ်ဟ…မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ဦး”
ဦးတုတ်ချိုလဲ ချက်ချင်း အချိုးပြောင်းပြီး ယု သူငယ်ချင်းကိုပြုံးပြလေသည်။….ယု သူငယ်ချင်းကောင်မလေး ထွက်သည်နှင့်…..အံကြိတ်ကာ..တိုးတိုး..ပြောပြီး..ထွက်သွားလေသည်။
“ကောင်မ ကံကောင်းတယ်မှတ်….ည ကျ စောစောပြန်လာခဲ့……ငါ..နင့်ကို လိုးဖို့စောင့်နေမယ် မယားငယ်လေး….ပြန်မလာရင်တော့..နင့်ဓါတ်ပုံတွေ….ဘာဖြစ်သွားမလဲ စောင့်ကြည့်နေ…..” *** *** *** *** *** ယု တယောက် စက်ရုံဆင်းသည်နှင့် လူယုတ်မာဦးလေး အရိပ်အခြေကြည့်ပြီး..ကိုလေးတို့ အခန်းသို့ လာခဲ့တော့သည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ ကိုလေးက မရောက်သေး….ယု တယောက် မီးပင်မဖွင့်နိုင်ပဲ..မီးဖိုချောင် ထဲသို့ တန်းဝင်ခဲ့သည်….တော်သေးတာက လပြည့်ည ဖြစ်နေတော့….အလင်းတွေက မှုံဝါးဝါး လေးမြင်နေရသည်။ လရောင်ဝါးဝါးအောက်… တကျီကျီနှင့် သွေးနေသော…ဓါးသွားတလက်…..အမုန်းများစွာနှင့် ပြည့်နေသော မျက်ဝန်းက ဓါးကို အာရုံစိုက်ပြီး သွေးနေသည်။ ယု ၏စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီဓါးနဲ့ လူယုတ်မာကြီးလက်မောင်းကို ထိုး… ကြောက်လောက်ပြီဆိုမှ.. ဓါတ်ပုံရော ဖလင်ပါတောင်း…ပြီးရင် ကိုလေးအိမ်ပြန်…..ကိုလေးနဲ့ပဲ တသက်လုံး အတူနေမယ်…….။ဓါးသွေးနေသော…ကောင်မလေး ယု ၏ အတွေး……….
“Happy Birthday ပါ..ချစ်…..ချစ်မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်”
ဓါးကို ယု တယောက်…ချောင်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ဒီအစီအစဉ်…ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့…မနေ့က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ ယု ချစ်သော ကို တယောက် မသိစေ..မမြင်စေချင်…ကို့ ကိုယု သိပ်ချစ်လိုပေါ့…ကိုရယ်..
ယု တယောက်..ဖယောင်းတိုင်များ မှုတ်ပြီး ဆုတောင်းလိုက်သည်…ကိုနဲ့ ဒီနေ့က စပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အတူနေရပါလို၏…..ဟုသာ။ ။
“သွားတာပေါ့..အိပ်ခန်းထဲ…မင်္ဂလာဦးည ဆိုတော့ ကိုလေးတို့..အိုရချည်သေးရဲ့…ဟားးးးး…..” “သူနော်…ပြောလေ ဆိုးလေ..မလုပ်နဲ့ …လာမှာပေါ့ကွာ ဖြည်းဖြည်းပေါ့….သူသိပ်ကဲနေတယ်နော်….” အိပ်ခန်းထဲပင်မရောက်သေး..ကိုလေး ..ယု ကို အနမ်းမိုး ရွာသွင်းတော့သည်။အော်…
နူးညံ့လိုက်တဲ့အနမ်း. .သိမ်မွေ့ချိုမိန်သော အထိအတွေ့…….အချစ်၏အရသာနဲ့ အချစ်မဲ့ အရသာ… အတော်ကွာပါလား..လို့ ယုတွေးနေမိတော့သည်။အပေါ်မှ ဝန်ထမ်းရှပ်လေး ကိုလေး တယု တယ ချွတ်လိုက်သည်။ ယုကလဲ အလိုက်သင့်….။ပြီးတော့ စကပ်ဇစ်လေး ဆွဲချလိုက်သည်….ယုတယောက်ခေါင်းလေးမော့ပြီး မျက်စိမှိတ်ထားလိုက်သည်။ ကိုလေးက ယု လည်ပင်းလေးကို ဖွဖွလေး အနမ်းချွေနေသည်။ ကိုလေး လက် ၁ စုံကလဲ ယု ၏ ရင်သားကို ဘော်လီပေါ်မှ ဖွဖွလေး ပွတ်သတ်ကျီစယ်နေသည်။ယု ၏ လက်၁ စုံကလဲ ကိုလေးကျောပြင်ကို ခပ်ဖွဖွလေး ကုတ်ခြစ်ရင်း…ကိုလေး၏ အချစ်ကို အပြန်အလှန်..သက်သေပြနေသည်။ ယု ရင်သားတို့..တင်းမာလာသည်နှင့် အမျှ ဘော်လီအဟောင်းလေး ကြပ်သလိုလို ခံစားလာရသည်။ကိုလေး လက် တစုံက ရင်သားပေါ်မှ နောက်ကျောဘက်ကို တဖြည်းဖြည်းရွှေ့လျားလာပြီး ဘောလီချိတ်များကို ဖြုတ်လိုက်သည်။ ရင်သား လွတ်လပ်မှုနဲ့ အတူ….ယု ပါးစပ်မှ အာ….ဟု ရမ္မက်ရှိုက်သံနှင့် အသံလေး နုတ်ဖျားမှ ခပ်တိုးတိုး ယိုစိမ့်ထွက်လာလေသည်။ ရုန်းထွက်လာသော ရင်သားတင်းတင်းလေးကို လက် ၂ ဖက်ဖြင့် အသာ ပွတ်ပြီး ကိုလေး ခေါင်း အောက်သို့ အနဲငယ် စောင့်ငဲ့ပြီး လျှာထိပ်လေးဖြင့် ပင့်လှက်လိုက်သည်။ …..အင်း..အင်…..အင်……။ကလေးငယ် နှိ့စို့သလို နို့သီးခေါင်းလေးကို ကိုလေး စုတ်သက် လိုက်သည် ဆိုရင်ပဲ… ပန်းရောင်လိုလို ညိုတိုတို နို့သီးခေါင်းလေးမှာ မာပြီး ထောင်မတ်လာသည်။ကိုလေးက နို့ကို စုတ်လို့ ဝပြီဆိုမှ ယု လက်လေး ၁ ဖက် မှာ ကိုလေးဘောင်းဘီထဲသို့ ကိုလေး၏လက် အကူအညီနှင့် ရောက်ရှိနေလေပြီ။ ယု အသဲယားသလို အူယားသလို ဖြစ်နေပြီး ကိုလေးလီးကြီးမှာ ကျောပြိုင်းပြိုင်းထကာ.. အမာဆုံး အတုတ်ဆုံး အချိန်သို့ပင်ရောက်ရှိနေလေပြီ။……ကိုေ